Sida loo sasabto haweenayda la qabo, tilmaamaha guusha la hubo | Ragga Stylish
Ragga Stylish | | Waqtiyada firaaqada
Baadhitaanka haweeney la qabo, sida caadiga ah, ma ahan wax fudud, laakiin waa jiraan tabaha waa inaad ogaataa hadaad rabto inaad ogaato sida loo sasabto haweeneyda habeen walba qof la seexata. Haddii aad la kulantay mid ka mid ah haweenkan ama khiyaaligaagu yahay inuu ku xirmo haweeney giraan leh, joogso maxaa yeelay qodobkaan waxaad ku baran doontaa oo ku ogaan doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
Marka hore, waa muhiim inaan maskaxda ku hayno in haweeneyda la qabo ay tahay mid leh lammaane taasna si aan u sasabo waa inaan siino wax ka wanaagsan waxa ay haysato maalin kasta markasta oo uu guriga yimaado iyo waxa uu helo habeen walba markuu sariirta tago.
Soo hel qalin iyo warqad, una diyaari si aad u samayso qoraal aan bilaabayno.
1 Maxay fure u tahay sasabashada haweeney la qabo?
1.1 Is muuji inaad ka duwan tahay oo raadso meelaha liita ee guurkaaga.
1.2 Weerarka, inkasta oo taxaddar leh
1.3 Samir yeelo oo ha ku degdegin
2 Sida loo ogaado haddii naag la qabo ay ku jeceshahay
2.2 Cilmiga luuqada
2.3 Sawir ka duwan
2.4 Maxaa dhacaya haddii ay qaaddo tallaabada ugu horreysa?
3 Maxaa la yiraahdaa naag la qabo si ay uga guuleysato
4 Taladayada; ku raaxeyso, ku baashaal oo baro sida looga cararo
Maxay fure u tahay sasabashada haweeney la qabo?
Furaha ugu weyn ee sasabashada haweeney xaasle ah waxaan horey ugu soo bandhignay hordhaca qodobkaan waana kan kujira inta badan dumarka waxaa soo jiita wax si hagaagsan ugu sii hagaajinaya si uun wixii ay horey u haysteen. Waxay eegi karaan nin jidhkiisu ka fiicanyahay, oo maalin walba ka qosliya ama si fudud u dhagaysta iyaga oo horeba loo ogaa in guurku ku dhammaado wax kasta oo la damiyo haddii aanu isagu naftiisa daryeelin maalin walba si taxaddar weyn leh.
💡Cabirka guskaaga Xaddidaad ma tahay marka laga hadlayo ku guuleysiga haweeney? Kadibna waan kugula talineynaa ka dajiso buugga Master-ka guska halkan si loo ogaado xeeladaha ugu fiican ee loogu talagalay badso cabirkaaga.
Tani waa fikradeena waa furaha, in kastoo ay jiraan waxyaabo kale oo badan, waliba muhiimad weyn oo ay tahay inaad tixgeliso markaad isku dayayso inaad sasabto haweeney xaas leh.
Talo, isku day inaad muujiso naftaada mid ka duwan, laakiin aan aad uga duwanayn. Haddii aad isku daydo inaad sasabato haweeney xaasle ah waxay sameysay karaahiyo dhab ah waxayna xirtay tusaale ahaan inaad iibsatay sannado ka hor, waxaad ku bilaabeysaa si aad u xun, si kasta oo aad isku muujiso inaad tahay qof ka duwan. Haweenka guursaday waxay raadsadaan wax ka duwan, laakiin ma ahan wax ay ku kala duwan yihiin ninkeeda oo ka sii daraya.
Is muuji inaad ka duwan tahay oo raadso meelaha liita ee guurkaaga.
Naagta la qabo si ay kuu xiiseyso, hadey guursatay iyo haddii kaleba, waa inaad si kala duwan isu muujisaa, in kasta oo aanad ka joogsan naftaada. Inaad u noqoto qof aanad ahayn waxay kuu adeegaysaa dhawr maalmood, laakiin mustaqbalka fog waxay kuu noqon doontaa wax adiga taban oo aad u niyadjabsan iyada oo ka tagaysa iyada oo ka fekeraysa in ninkeeda oo dhami uu yahay sida uu yahay iyo mararka qaarkood Xitaa aad buu u jeclaadaa iyada in muddo ah.
Muuqaal kale oo muhiim ah ayaa ah inaad ogaatid qodobada daciifka ah ee guurka gabadha aad damacsan tahay inaad sasabato. Falanqaynta xaalada, markay haweeneydu ama ninku doonayo inuu xiriir la yeesho meel ka baxsan guurka, waa sababta oo ah waxbaa dhaca ama si fiican uguma socdaan. Waxa kale oo ay noqon kartaa inaad raadineyso wax ka duwan ama ku nool dareemo cusub, laakiin haddii ay sidaas tahay, wax waliba way fududaan doonaan oo way fududaan doonaan waxaana ku dhowaan lahaa inaan idhaahdo waad joojin kartaa akhriska oo waad raadisaa.
Si aad u ogaato sida loo ciyaaro kaararkaaga waa inaad ogaataa waxa ay yihiin meelahaas daciifka ah. Waxay noqon kartaa in waxyaabaha ugu yar ay fashilmaan ama in wax walboo guud ahaan fashilmaan, taas oo kuu noqon doonta war aad u wanaagsan maadaama ay kuugu fududaan doonto inaad sasabato iyada.
Dabcan, maskaxda ku hay markaad ogaaneysid qodobada daciifka ah ee guurkaaga inay tahay inaad ku sameyso qaab dahsoon oo qarsoodi ah. Haddii aad raadineyso wax ka baxsan guurkaaga, waa sababta oo ah guurkaaga uusan aad u jeclayn sidaas darteedna ma jeclaan doontid inaad in badan ka hadasho muddo dheer.
Weerarka, inkasta oo taxaddar leh
Markaad ogaato daciifnimada haweeneyda aad xiiseyneyso, waxaad muujisay inaad si ka duwan sidii hore oo aad hubto in qolada kale ay ku qaabileyso kuna xiiseyneyso, waxaa la gaaray waqtigii lagu sii socon lahaa weerarka.
Waa lagama maarmaan talaabadan inaad si degan oo taxadar leh u qaado mar haddii aynaan iloobin waxaan isku dayeynaa inaan sasabno haweeney xaasle ah oo inta badan, inkasta oo aaney kulligood ahayn, waxay ka baqeysaa inay khiyaamayso ninkeeda, hadey jacayl u qabaan iyo haddii kaleba waxayna doorbidayaan inay amni helaan intaanay wax tallaabo ah ama samayn dhaqaaq kasta.
Fikrad fiican ayaa noqon karta ugu yeer casho ama cabo oo is muuji. Dabcan, ka taxaddar meesha aad geynaysid maxaa yeelay waa inaadan waligaa iloobin inay leedahay lammaane iyo inay iyadu ku qaban karto daqiiqadda ugu yar ee la filayo. Haddii ninka shaqada ku jira uu ku qabto adiga oo la qadeeya xaaskiisa, naftaada u dhiib geerida iyo tan ugu weyn oo la iloobo maadaama haweeneyda la qabo ay wax walba diidi doonto si aysan u lumin waxa ay haysato, weligeed kuma soo wici doonto ama kula joogi mayso.
Samir yeelo oo ha ku degdegin
Ku aadida weerarka micnaheedu maahan in berrito jaceylkaaga cusub uu kala tagayo ninkaaga, wax walbana uu ka tagayo, inuu kula raaco nolol cusub. Xiriirku waa inuu usii socdaa si tartiib tartiib ah Nasiib darrose adiga, waxay doorbideysaa inay sii noolaato labada xiriirba, marka waa inaad ogaataa sida loo samro.
Nasiib wanaag, go’aanka ah inaad ku sii nagaato dhinaceeda mar alla markii aad ku guuleysatay inaad sasabato adiga ayay kugu xiran tahay. Waana inaad si aad ah uga feejignaato waqti kasta waxaad rabto iyo hadday kugu filan tahay inaad sasabato naagtaas la guursaday ama aad ku noolaatid tacabir ama aad la rabto wax kale, taas oo shaki la’aan ay tahay inay dhacdo maxaa yeelay waxay jebisaa xiriirkeeda.
Sida loo ogaado haddii naag la qabo ay ku jeceshahay
Weligaa ma is weydiisay haddii muuqaaladaas haweeney la qabo oo aad la kulantid maalin kasta ay micno kale leeyihiin? Noocyada noocan ah xaaladaha had iyo jeer waxaa lagaa tagi doonaa inaad isweydiiso haddii runti ay dan ka jirto dhankooda, mise waa uun nooc ka mid ah xiisaha.
hay qodobo muhiim ah waa inaad falanqeeysaa:
Xiriirinta indhaha kama dambeyso, laakiin waa hab caqli badan oo lagu aasaaso "kanaal isgaarsiineed". Haddii aad dhab ahaan u xiisaynaysid iyada, iyadu si joogto ah ayey kuu soo fiirin doontaa iyada, xitaa si joogto ah oo joogto ah.
Xaqiiqdii, haddii haweeney guri joog ahi ay ku jeceshahay, waa inaad iska jeclaataa naftaada ha ku qaadin iyada indhaheeda, maxaa yeelay iyadu waxay noqon doontaa qofka bilaabaya xiriirka indhaha.
El isweydaarsiga jaleecada waa daliil. Haddii ay indhahaaga ku sii hayso oo aysan indhaha ka laaban, waxaa jira xulashooyin wanaagsan oo lagu guuleysto. Haddii ay dhacdo inay dib u eegaan, waa inaad sugto isbeddelka habdhaqankan ee mustaqbalka.
Luuqadda jidhka ayay ku soo saari karaan calaamado caddayn cad u noqon doona inaad adigu jeceshahay. Ka soo qaad inay ku socoto si dareen ah, si aad u eegto iyada, ama aad u salaaxdo timaheeda markaad fiirineyso iyada.
Caddaynta aad jeceshahay iyada ayaa horayba u caddayn doona haddii waxay isku dayeysaa inay kuu soo dhowaato, si xeeladaysan, ama raadso jagooyinka istiraatiijiga ah si loo bilaabo wadahadal kula jooga.
Sawir ka duwan
Haddii aad maamusho inaad la hadasho oo aad u fiirsato, inta lagu guda jiro wadahadalka, inay ku tusayso weji iyada ka mid ah oo aan la ogaan karin marka hore, sidoo kale waa calaamad muujinaysa inuu adiga ku xiiseynayo.
Waa inaad ogaataa in naagta la qabo ay siiso sawir gaar ah dadka ku hareeraysan, laakiin taasi micnaheedu maahan inay tahay sawirka ugu dhameystiran. Haddii aad tahay qofka ku jecel, waa suurtagal taasi muujiyo qaybo ka mid ah shakhsiyadiisa oo aad u yar oo og inay jiraan.
Marka haweeney la qabo ay bixiso raaxo, wixii ka baxsan waxa aan ugu yeeri karno "aaggeeda raaxada", waxay caddeyn u tahay inay adiga ku jeceshahay. Waxyaabaha kale, maxaa yeelay waxaad awood u leedahay inaad ka dhigto mid ifaya wax aysan dooneyn inay dadka kale u muujiso, laakiin kula joogto waxay dareemeysaa raaxo aad u fiican.
Maxaa dhacaya haddii ay qaaddo tallaabada ugu horreysa?
In kasta oo aysan taasi u badnayn inay isla markiiba dhacdo (xitaa ma dhici karto xitaa), mid ka mid ah fursadaha haddii naag la qabo ay ku jeceshahay waa in nafteeda yaa qaadaysa talaabada ugu horeysa.
Sidee uga jawaabtaa xaaladahaas? Dabcan waa inaad u fududeysaa iyaga, isku day inaad ka dhigto xiisadda bilowga ah sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, oo cadee inaad adiguna xiiso u qabto iyada. Furaha ayaa ah in talaabada ugu horeysa loo horumariyo sida dabiiciga ah intii suurtagal ah.
Sida aan aragno, yaqaan sida loo tarjumayo luqadda jirka ee dumarka Waa lagama maarmaan in la ogaado haddii uu ku jecel yahay, oo halkaas ka qaad tallaabooyin ammaan ah. Sidoo kale caafimaad ma ahan inaad waqtigaaga ku lumiso dumarka aan danta dhabta ah kaa jirin, ama kuu fiirinaya xiisaha, iwm.
Maxaa la yiraahdaa naag la qabo si ay uga guuleysato
Ka guuleysiga haweeneyda ma aha hawl aad u fudud. Haddii aad xaas tahay, way ka sii dhib badan tahay, laakiin sinaba suurtagal maahan. Sirta weyn ayaa ah in "lagu dhiirrigeliyo" inay ka fikirto, taas oo ah, ka xanaaq fekerkeeda haddii ay dhab ahaan la joogto qofka ay rabto inay la joogto, maxay sababta ay waqti badan ula qaadataa asxaabta in ka badan isaga?
Waa maxay ereyada aad isticmaali karto? Maaha, si kastaba xaalku ha ahaadee, inaad adeegsato ereyo sixir ah, laakiin inaad ogaato waxyaabaha aad jeceshahay iyo kuwa aad neceb tahay illaa heerka ugu sarreeya.
Kadib waxaan aragnaa tusaalooyin ka mid ah weedho wax ku ool ah loogu talagalay guurka naag la qabo:
Waan ku jecelahay maxaa yeelay waxaad tahay qof jahawareersan, mid gaar ah, oo ka duwan dumarka kale. Iyaga had iyo jeer waxay jecel yihiin inay dareemaan mid gaar ah, oo ka sarreeya dumarka kale, oo isbarbardhigaya.
“Ma tihid sida kuwa kale… waxaad haysataa wax aanan garanayn wuxuu yahay, wax aan la fasiri karin oo i dhibaya, taasi waxay igu kalifaysaa inaan jeclaado ”. Isla safafka kore.
"Markaan isku soo dhowaanno, waxaad i sarreysiin doontaa adduun kale, oo ah adduun aan aniga iyo adiga keliya ku wada jirno." Oraahdan waxaad horey ugu gudubtay wajiga tooska ah, halka aad joogto adiga oo soo bandhigaya xaalada aad horay ugu wada jirteen meelaha qaar.
Quruxdaada darteed, waxaan awoodi lahaa inaan qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah. Weedhan waxaad tahay muujinaya geesinimadaada iyo saadaalintaada si ay ula fal gasho iyada. Bandhiggan xoogga ayaa muhiimad weyn u yeelan doona iyada; ha iloobin in hubin darrida iyo baqdintoodu badan tahay.
Adiga darteed waxaan noqon karaa ninka ugu fiican, waxaad ka mid tahay haweenkaas runtii u qalma wax walbana waan sameyn lahaa. Ku sii wadida xariiqda jumladdii hore, waxay ku saabsan tahay ka saar cabsida ka dhexjirta isla markaana ka dhigto mid amaan ka leh ujeedooyinkaaga. Niyad jab weyn oo iyada ku dhacda ayaa noqon doonta haddii "marxaladda cabsi leh" ay kaa dhigeyso inaad ka tagto shirkadda daqiiqadda ugu dambeysa
Taladayada; ku raaxeyso, ku baashaal oo baro sida looga cararo
Qof kastaa wuu ka duwan yahay, laakiin taladeenu waa inaad ku raaxeysato xiriir kasta, xitaa kan laga yaabo inaad la leedahay haweeney xaasley ah oo aad ku raaxeysato adigoon aad uga fikirin. Haddii aad wax badan ka fikirto wax walbana waxaa laga yaabaa inaad ku waalato sidoo kalena aakhirka aadan ku raaxeysan guulahaaga iyo haweeneydaas aadka u fiican ee aad ku guuleysatay inaad sasabato.
Sidoo kale waa muhiim inaad barato inaad carartid, si kasta oo aad u jeceshahay ama aad u xiisayso waxaad la joogtaa naag, markay arrimuhu xumaadaanna waa inaad sii kordhisaa sida ugu fiican. Haddii haweeneyda aad sasabatay ay noloshaada ku murgiso wax ka badan inta ay kaa farxineyso, ninkeeda had iyo jeer waa joogaa waana inaad ku noolaataa meel qarsoon oo joogto ah, baro inaad carartid, naftaada wax badan oo wanaagsan ayaad sameyn doontaa.
Diyaar ma u tahay inaad sasabto naag la qabo oo aadan ku guuldareysan isku dayga? Haddii aad dooneysay inaad waxbadan ogaato si aad u guuleysato, ha moogaanin waxa ay yihiin dhibcaha daciifka ah ee dumarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Sidee loo sasabaa haweeney la qabo?
219 faallooyin, ka tag taada
Waxaan rumeysanahay in tani aysan u adeegin oo keliya in lagu guuleysto haweeney la qabo laakiin sidoo kale inay ku hayso kan aad haysato gurigaaga… Waxay ila tahay xeelad wanaagsan.
maxaa talo wanaagsan ah, kuwa faraxsan ayaa waxtar badan leh
Ku jawaab isaias
Waa hagaag waxaan la joogay naag la qabo laakiin waxay qaadatay 5 maalmood maxaa yeelay waxay ahayd oo kaliya sheeko marka aan u soconayno inaan aragno ninka oo akhriyaya dhammaan fariimaha in shitku yahay mid run ah waa 24 sano jir aniguna waxaan ahay 16 si yar oo igayar run oo iyadu waxay igu kalifaysaa jacayl
Hadaadan jeclayn, markaa chingassss aaa your puuuta madreeee asshole waxaanan rabaa inaad ogaato inaan kaa fogeeyay puuuta maderreee
Ku jawaab cabroooon
ajjajajajjajajajajaj maxaa nasiib ah
maqaal aad u wanaagsan, aad baan uga helay, sidoo kale waa xaalad jaanis ah oo rag badan ku dhacda mana ku kala saari karno waqtiga. maqaal aad u fiican hambalyo
Ku jawaab carlos marroquin
Runtu waxay tahay, tani runti waxtar ayey u leedahay labada qaybood midkood, sancho iyo sanchado, hehehehe… tani runti way shaqaysaa, walaalkay waa hummingbird waligiisna wuxuu ii sheegay wax la mid ah tan; Waxaan u maleynayaa in dhinaca ugu weyn ee la galayaa uu yahay mid qiiro leh.
Jawaab FERNANDO REYES
Waad salaaman tahay, waxaan jeclahay haweeney la qabo, caruur ayey leedahay weyna iga weyntahay, waa 32 jir aniga 19 jirna, si kasta oo ay tahay, waxaan u sheegay in aan ka helay iyadana isla waxii ay ii sheegtay laakiin waxaan ku darsaday inay guursatay intaa kadib waxay igu tiri: aad baan kuu jeclahay jaceylkeyga ha ilaawin.
Runtu waxay tahay waan jeclahay, waan jeclahay mana aqaano sida looga dhigo caqabadaas dhibaato. nin_.com@hotmail.com ah tani waxay dhacday oktoobar 12, 2009 lafta waa qabow
Waad salaaman tahay anonymous, waxaan kaliya aqriyay warqadaada quusta, runtu waxay tahay inaan isku dayay inaan la xiriiro iyada, ama taleefan, taleefan ama taleefan, aniga oo aan dhibsado inta badan, sidaa darteed way ogtahay waxa jira, iyada kaliya ayaa sheegi doonta adiga iyo Sida loo cadeeyo waxaad rabto, waxaan rajeynayaa in fariinta aysan soo daahin, nasiib wacan
Maqaalku wuxuu ku dhuftay ciddiyaha madaxa, waxaan soo maray xaalado isku mid ah iyo tan shucuurta waa mid run ah, haweeneydu, si ka duwan ninka, waxay u dhaqaaqdaa dhinacaas, wax badan uma baahna in la ogaado qaladaadkooda, laakiin Waxa ugu muhiimsan Waa in la ogaado in waxaas oo dhan ka dambeeya ay jiraan dad ku dhibaatoobi doona guuristaada, sidaa darteed labadiinaba adiga iyo iyaduba waa inaad hubsataan waxa ay doonayaan iyo inta ay diyaar u yihiin inay gaaraan. Waxay soo baxday, waa wax ku ool ... laakiin iska jir, dhul aad u khatar badan.
Runta ayaa ah in wax kasta oo maqaalka uu sheegayo ay run yihiin. Qodob kale oo maskaxda lagu hayo waa inaanad had iyo jeer u baahnayn inaad aragto waxa ka maqan ... sidoo kale waa inaad tixgelisaa waxyaabaha muuqda ee ay haweeney kasta jeceshahay, tusaale ahaan: Haweeneydee ma jecla marka aan ubax siinayo? Ama shukulaatooyin? Waa wax iska cad inay bixiso ... iyo si aad u wanaagsan. La soco dareenka feejignaanta, laakiin waligaa ha dhibaateynin, dhibaato aad u yarna ha keenin.
Waxaan rabaa inaan sasabo xoghayaha ka shaqeeya dugsiga sare ee aan ka bixiyo adeega bulshada wuxuu leeyahay lugaha 10 wuxuuna ku socdaa 40ka laakiin ma aqaano sida fursad loo helo tanina way iga caawin doontaa mahadsanid PS Waa xun tahay inay leedahay Gabadh 5 jir ah laakiin dan kama lihi hahahahahaha neta waxaan rabaa dameerkaas yar
Dhibaato ayaa i haysata, waxaan isku sii arkaa haweeney la qabo, maalin walbana waan arkaa, waxaan ahay qof ku nool, kaliya waxaan rabaa inaan ogaado waxa ay kula taliyaan fadlan. waa 21 jir aniguna waxaan ahay 40 jir
tani waa mid aad u faa'iido badan
Runtii waa wax aad u wanaagsan, isticmaalkeeduna waa kan ugu fiican
Jawaab Freddy Hermogenes Miranda
Qarnigee ayaad ku nooshahay?
ciise valadez dijo
Waxaan u maleynayaa in haweenku runtii leeyihiin dareen. Fiiri, anigu waxaan ahay ama waxaan ku jiraa furiin, inkasta oo taasi jirto hadana waxaan guul la qaatay dumarka kale, sidee? Iyagoo ku jira fikirradooda iyo danahooda si kastaba ha noqotee mudane AAD XASUUSAN MAYA WAXYAABAHA tani waa in si weyn loogu guuleysto iyaga.
Ku jawaab ciise valadez
Waxaan ka helay tilmaamahan cajiibka ah, maadaama aan ku jiro xaalad la mid ah, hambalyo
Ku jawaab oscar sevilla
jms, waxaan u maleynayaa in si kasta oo aan u gaarno sinaanta ragga iyo dumarka, dareenka haweenku aad ayuu uga duwan yahay kan ragga, marka anigu waxaan aaminsanahay oo aan aaminsanahay in maqaalka uu waafajinayo xaqiiqda, haweenku waxay u baahan yihiin in wax badan laga daryeelo saamayn leh, sida wax kasta oo kale.
Jawaab Francisco lorin colorado
wasmo macaan dijo
Tani waa tab wanaagsan laakiin maxaa dhacaya haddii gabadha aad sasabeyso ay is khilaafto
Ujawaabida waalan galmada
Aad u fiican, laakiin runtii waa inaan maskaxda ku haynaa in haddii aan jacayl ku dhacno ay tahay xaalad aad u cakiran.
ilmo aan jeclayn dijo
Waxaan sasabtay ilaa 220 qiyaas ahaanna waxaan ahay 40 jir runtiina waxay tahay in tan ay tahay waxa ugufiican ee lagu sasabto waxay lamid tahay tahniyadaha qarsoodiga ah ee ugu sareeya qofkasta oo wax qoray.
U jawaab ilmaha aan jacayl lahayn
Waxaan rajeynayaa inuu heli doono qof sidaada oo kale ah xaaskeyga way adagtahay in la sasabto
Wuxuu ku siiyay nambarkeyga si aad ii calaamadeyso haddii aad khibrad badan leedahay sida aad u leedahay 3323130805
Waad salaaman tihiin, maqaalkani waa caawinaad iyo tilmaan marka laga soo tago, runta ayaa ah in sidoo kale aan jeclahay haweeney la qabo, waxaan isku dayay inaan xakameeyo oo aan iska iloobo muddo sanad ah laakiin waxaan u baxayaa taariikh aan la galno iyada 2 Waqtiyada hadda iyo mar kale ayaan jeclahay, Iyadu waa guursatay aniguna sidaas oo kale, laakiin waxaan si hoose u ogahay inaanan weligay ka tegi doonin qoyskayga .. Waxaan ku jiraa xaalad adag
Ku jawaab joota
maqaalka waa mid aad u caqli badan, aad u caqli badan,
Waa hagaagtay waxaan u malaynayaa inaad runti sax tahay, sidoo kale aniga way igu dhacday aniga iyo haweenayda xaasleyda ah ee aan la wadaago laakiin xilligan la joogo waxaan xiiseynayaa xaaska inaadeertay xaaskeyga tan iyo markii aan la kulmay waan xiiseynayay iyada laakiin taasi waa dhibaatada in haddii aan bilaabo sasabashadeeda, waxaan u sheegi doonaa ninkeeda iyo xaaskeyga, fadlan isii hanuuninta maxaa yeelay runtii waxaan doonayaa inaan habeen la qaato.
Waa maqaal wanaagsan, laakiin si guud u qeexan, mid kastaaba wuxuu leeyahay qaabkiisa ay haweeney ku gaaraan, hadalladooda, codka codkooda, booska ay ku sugan yihiin, dharka, qaabka loo joogo, sirdoonka, tafaasiisha iyo haweeney kasta waa adduun in lakala baxo ... waxaa jira faahfaahin badan oo laga wada hadlayo, waxaan kugula talin lahaa in si faahfaahsan loogu sheego oo aan cabsi laga qabin maadaama ay ahayd sidii dumar nooc gaar ah looga guuleystey, maxaa yeelay mararka qaar qofku wuxuu moodaa inuu guuleystey naag la qabo laakiin waxa aynaan ogeyn waa iyada oo aan marka hore guuleysto, dareenkaas kale ee haweenka ah ee aynaan fahmin oo aanan haysan, ma aragno baraaruggeeda oo kacsan oo naga guuleysanaya annaga oo aan xitaa ogeyn, mawduuca waa mid aad u ballaaran. .. inbadan waxay dhaheen waxaan soo qabtay dumar badan laakiin waxaan rabnaa faahfaahinta midkasta oo iyaga ka mid ah iyo inaan awood u yeelano inaan gabagabo ka gaadhno sida, meesha, duruufaha, sababta ay haweeneydaasi ugu ogolaatay in la guuleysto, dhamaanteen waxaan dooneynaa inaan wax baranno oo aan guuleysano haweenka, waxaan rajeynayaa inaan aqriyo sheeko run ah oo wanaagsan. nasiib wacan qof walba
Waxaan jeclahay habar siyaasadeed oo xaasle ah waxaan ku qaataa fikirkeeda
laakiin ma aqaano sida loo dhaho, aad ayaan u jeclahay, mar dambe ma qaadan karo
ma dheereyn doono, fadlan, haddii aad i caawin karto
Waan u mahadcelin lahaa iyaga xfa
Ku jawaab luis javier nuñez
aad u fiican fadlan ii soo dir talooyin kale oo aan u baahanahay si aan uga guuleysto haweeney xaas leh oo jaceyl ii qabo waxaan u baahanahay inaan sariirteeda dhigo si ay u dareento dareen gaar ah
Ku jawaab jhonny
Hagaag waxbadan maad oran laakiin nin waliba waa inuu dejiyaa qaabkiisa
1 caqli yeelo 2 inay ku aaminaan 3 u sheeg inay banaanka u baxaan si aan waxba galabsan 4 gacmaheeda qabtaan markay u dhigmayso waa loo qaadan doonaa
Ku jawaab jose reyes
Aad baan uga helay
Dhamaantiin waan idiinku hambalyeynayaa, laakiin waxaan rabaa inaan idinka codsado wixii talo ah ee ku saabsan 2 todobaad ka hor waxaan dareemay soo jiidasho qof ay wada shaqeeyaan laakiin kani waa xaasle, haweenayda aan mahadin ee dhibaato ku qabta ninkeeda waxay ii sheegtay inay tahay 23 jir waxay leedahay wanaag jirka waa qurux badan tahay waana shaqeysaa faahfaahintuna waa aniga waxaan ahay 33 sidaan yeelo, marka laga reebo waxay u socotaa sida ay u jeceshahay qof yaqaan ah iga caawi sidii aan u kasban lahaa fadlan mahadsanidiin kahor
Farsamada la raaco iyadoo la raacayo fikradeyda. Waa diyaarin joogto ah oo sasabasho ah, oo loo qaybiyo siyaabo loo dhaqmo wakhti kasta, haweeneydu way ogtahay kahor intaadan ku arag haddii aad farxad ka dhigayso. Haddayna mudan tahay in lagu ogaado maxaa yeelay waad ka duwan tahay waxaana u sii dheer inaad dareento inaad hubiso awooddaada nin ahaan mar walba. . Mar kasta oo aad aragto, u fiiri iyada oo ay jeceshahay, aragtidaadu waxay ku wareegaysaa dhammaan jidhkeeda oo istaag iyada oo aan la kala garanaynin iyo inta u dhexeysa lugaheeda inta aad rabto, waa farriin iyada ku wareersan, oo waxay isu sheegi doontaa tan midkood ayaa doonaya inuu sariirta ha i seexin adoon wax kale iga sii darin. iyada ku sasab inta aad karayso. Sii ubax oo u sheeg inay ka qurux badan tahay. in aanad u baahnayn inaad cadar gasho maxaa yeelay urta maqaarkaaga ayaa ugu badan
caraf udgoon ayaa diidaya, iyo in aan bilaabo inaan gariiro markii aan ku ag joogo. . u sheeg inta aan jeclaan lahaa in qofka kula jooga uu runtii ogaado in ay tahay wax kasta oo aad u qalanto. Markii aad fursad u hesho, dhunkada gacanteeda si ay u dareento xoogga salaaxidaada ee afkaaga.Ha joojin waligaa inaad eegto indhaheeda oo ay kugu aragto inaad tahay ninkeedii maxaa yeelay aragtidaada waxay ku lifaaqan yihiin adduunyo damac, iyo hadday ku weydiiso maxaad sidaa ugu eegaysaa U sheeg inay tahay wax aan macquul ahayn inaan la samayn oo aad ugu mahad naqaysid ILAAHAY INAAD HESHO FURSADDA AAD JIRTO OO AAD HELI KARTO IN AAD SHAQO U LEEDAHAY IN AAD KA TIRSATO OO AAN INTA BADAN INTAAN INTA BADAN Waxaan rajeynayaa inay caawin doonto adiga, laakiin waa inaan kaaga digayaa in haddii aadan la kulmin, dareenka haweeneydu uu arko
Way fiicantahay maxaa yeelay ka sakhraaminta haweeneyda mar hore la qabo waxaan ku ilaashan karnaa cilaaqaadkeena iyadoo la arko saaxiibadeenna sidoo kale guursaday, si aan ugu dambayn u aragno inay naga dhiman tahay oo aan siinno waxa ay u baahan tahay oo annaguna aan keli ku nahay maskaxdeeda .. inkasta oo taasi ay tahay mid aad u dhib badan ... sidaa darteedna nagama qaadayaan habsiinta hehe!
Waxaan jecelahay jaceylkeyga shaqaalaheyga oo lug la nool mudo 5 sano ah, horey ayaan u baxnay oo aan cabnay khamri ka dibna biir waan wareernay waxayna ii sheegtay nolosheeda oo aad ugu adkeyd balanqaadkii ugu horeeyay ee ay yeelatay seygeedi hore iyo in ay 2 caruur ah sameysay ka dib ayeey bilawday oohinta iyo qunsulka ka dibna waxaan bilawnay inaan si diiran u dhunkano laakiin waxa xun ayaa ah inaan maqaaxi ku sugnaa; Halkaas ayaan uga tagnay waxaanan doonayay inaan geeyo hostel laakiin waxay ii sheegtay inay ku qasban tahay inay gurigeeda aado maxaa yeelay walaasheed ayaa iyaduna iyada sugaysa, taksi ayaan qaadanay oo gurigeeda ayaan uga tagnay. Maalintii dambe ayaan la hadlay oo aan u sheegay inay sirta ilaashato waxayna ii sheegtay inay noqonayso. Waxaan ku casuumay inay ku baxdo 4 maalmood gudahood si aan u qaxweeyo ama aan wax u cuno waxayna ii sheegtay inay maalin uun arki doonto inay noqon doonto. Waxaan rabaa inaad iga caawiso sida aan u qaadan karo si aan tayda uga dhigo.
Abwaan, Mad Badh iyo Troubadour dijo
Maqaal aad u wanaagsan oo si fiican ayuu u shaqeeyaa haddii aad caqli leedahay.
sida wanaagsan javier ayaa yidhi
Ha u isticmaalin inaad ku burburiso xiriirada xasiloon.
Hada waxaan ku iri waxaan u isticmaalaa inaan ka dhigo haweeneyda aad ku riyooto mid faraxsan.
Jawaab Poeta, Medio Loco Y Trouvador
Dibiga Julio Cesar dijo
Waxaan u maleynayaa in qodobka laga hadlayo uu aad u wanaagsan yahay, waxaan kaliya ku dari lahaa ra’yi gaar ah oo aan aqaan sida loogu ciyaaro maqnaanshaha; Taasi waa, sahayda badan waxay yareyneysaa qiimaha, inta badan ee ay arkayaan oo maqlayaan, in yar oo loo baahdo in qofkaasi kuu tixgaliyo, ka bixitaan yar oo ku meelgaar ah ayaa ka dhigeysa inay wax badan kaaga hadlaan Xusuusnow in yaraanta alaabtu ay kordhiso qiimaheeda.
Jawaab Toro Julio Cesar
Wooooo, waxaan u maleynayaa inay kuwani igu dhacayaan, kaliya waxaan ahay haweeney, qofkuna wuxuu doonayaa inuu sidaa igu guuleysto, laakiin waxaan ahay haweeney la qabo
Hagaag isaga Angelica ha u seegin fursadda ah inuu isku dayo meel kale
Ku jawaab pikon
Ujeeddadu maahan guuleysiga jireed ee qofka kale, laakiin waa mid ruuxi ah, fikirkiisa. Halkaas jacaylka dhabta ah ayaa ka dhaca. Farxadda sasabashada waxaa la siiyaa bini-aadamka oo dhan iyo xiisadda ka sii badan ee dhagarta sasabashada ay keento, ayaa weynaysa rabitaanka iyo raaxada. Seduction waa fikrad qarsoodi ah, waa qoraalka in lagu guuleysto qofka kale, lagaa dhigo inay kugu tiirsan yihiin adiga, iyo rabitaanka badan ee ay soo saarto, raaxada badan ee ay abuureyso. Sidii faallooyinkii hore, haweenka la qabo waa mowduuca iyo sheyga sasabashada. Iyaga oo ah maaddo ku sasabata hareerahooda, ma aha oo kaliya inuu ninkeedu iyaga iska leeyahay, qof kasta oo soo jiidashadooda ay soo jiitaan iyaga ayaa iska leh (ka taxaddar inaadan tan u fasirin gaalnimo), fikirka iyo rabitaanka kuwa iyaga jecel ayaa iska leh, iyadu waa shayga rabitaankeeda iyo fikirkeedu, taas oo ka dhex kicisa dadka is jecel inay wax ka badalaan dhaqankooda marar badan si qasab ah (waan ag maraa iyada oo kafeega ay ku dhacdo maxaa yeelay gacanteeda ayaa gariiraysa). Tani aad ayey caan ugu tahay dadka wada shaqeeya. U fiirso karraaniga ama kaaliyaha dukaanka haddii aad tahay waxa uu jecel yahay, maadaama uu muujiyo xoogaa dhibaato ah markuu wax qabanayo ama wax qorayo, fikirkiisa waa dhibsan yahay. Waxaa jira xeelado fara badan oo sasabasho ah, dhammaantood waa ansax, in kasta oo dalabka cad ee galmada loo qaadan karo midda ugu naxariis daran oo aan laga fiirsan. In kasta oo sasabasho dheer oo lagu guuleystay ka dib ficil galmo uu noqdo mid xorayn ah oo caddaynaya soo jiidashadaas wadaagga ah, ficilka galmada laftiisa ma aha mid sasabasho ah
Tani waxay si fiican u leedahay talo wanaagsan
Faallooyin aad u wanaagsan qodobka waa mid xiiso leh runtiina horeyba waan u soo gabagabeeyay go'aankeyga.
Bilowgii maqaalka waxay ahayd wax aad u muujinaya, oo leh istiraatiijiyad aad u wanaagsan oo lagu hanto ruuxiisa laakiin xeeladdee ayay soo jeedin lahaayeen inay noqon doonto tan ugu fiican ee markaan sariirta seexdo ay tahay wax aan la iloobi karin, waxaan ula jeedaa waxaan rabaa inay baabi'iso waxa ay haysato waxaan kaliya doonayaa inaan naftayda siiyo dhadhan aad u wanaagsan, oo aan doonayo inaan ku celiyo ...
Waad ogtahay waxaan jecelahay haweeney aad u qurux badan, waxay qiyaastii tahay 30 sano jir waxayna leedahay caruur, waxaan ahay 18 sano jir, waxay xiiraysaa timaheeda waxayna imaaneysaa guriga si ay ugu marsato ayeeyday iyo habaryartay, way xiiraysaa timahayga iyo Waan lahadlaa laakiin maya waan aqaan sida logu sheego inaan jeclahay iyo sidaa ...
Ku jawaab carter
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaaday naag xaas leh, runtii aad ayaan u jeclahay, halkaas waxaan ku dareemaa inay iga xanaajiso, ama way igu adkaataa markaan la joogo asxaabta kale, waxaan leenahay saaxiibtinimo, waxaan rabaa inaan aaminsanahay m qaldan, khalad saaxiibtinimo. Runtii kuma dhiiran in aan u sheego sida aan iyada ka dareemayo.
Mawduucu aad buu u wanaagsan yahay laakiin waxaan ku jiraa xaalad aan jeclahay haweeney iga weyn 14 jir oo waa la guursaday maalintii kale waxay ii sheegtay waxa aan ka dareemay iyada waxaanan u sheegay inaan ka helay waxa ay jeceshahay. Ma aanan dan ka lahayn iyada laakiin waxba inama dhex mari karaan maxaa yeelay way guursatay iyo in aanan ka xumaan karin damiirku ii sheegi karin waxa aan sameeyo, waan ku adkeysanayaa ama waan ka fogaanayaa iyada
Waxaan jeclaaday jaalkeyga waanan guursaday inkasta oo ayna si toosa iiga sheegin hadana waan ogahay inay xiisayso inkasta oo ay tahay tacabir laakiin way ka baqaysaa waayo isagu waa nin daroogo cuna oo sakhraansan maxaan sameeyaa laakiin waan jeclahay iyada
Waxaan u maleynayaa inay runti daacad daro tahay in lagu ciyaaro dareenka labadaba iyadoo kuxiran kiiska, mararka qaar haday ahaan laheyd madadaalo waxay ku dhamaan kartaa masiibo, waxaan sifiican u maleynayaa hadii ay tahay haweeney xaas leh ama nin inay iyagu yihiin kuwa bilaabaya Xiriirka taas oo ah in la yiraahdo khatartaada hoos u dhig haddii aad runtii u baahan tahay wax kale ...
Waxaa jirta naag la qabo oo ila shaqeysa. Wuxuu ii sheegay inuu haweeneyda aad ii jecel yahay, wuuna iga fikirayaa aniga oo ka baqaya inuu ka gudbo qadka saaxiibtinimada. Laakiin waxaan ugu yeeraa "qurux" ama "qurux" waxayna ii sheegtay inay jeceshahay laakiin taasi waxay ka dhigeysaa inay xishooto. Sababtoo ah waxay noqon kartaa?
Jawaab Luchito Lopez
Waxaan isku dayayaa inaan soo qaado gabar la qabo, waxaan fahansanahay in xiriirka kala dhaxeeya ninkeeda uusan hada wanaag saneyn. Qof ma isiin karaa talooyin aan ku kasbado?
rag kulul dijo
sawir la qaado ciyeygaaga oo aad u adag, gadaal ku qor inaad afar u eg doontid sida qaniisadda oo aad caashaqi doontid, ku dheji sawirka baqshad una soo bandhig qof ahaan, oo ay weheliso carnation cas iyo erayga »waan ku jeclahay» dhagteeda oo aad u jilicsan, kana codsanaya inay qaxwo ama qado qaadato; Isla markaaba waad ku baxaysaa adigoo dhoola cadeynaya oo markaad shaqada ka tagto adigaa iska leh, waxaan kuu xaqiijinayaa inaad u raaxeyso iyada oo aad u macaan maalinta ballanta, laakiin markaa waa inaad u adkaysataa inta u dhexeysa boodhka iyo boodhka sheekada ay u socoto sii deynta nolosheeda aan faraxsaneyn ee deriska la ah ninkeeda, halkaas waa inaad noqotaa mid feejignaan leh, oo had iyo jeer siiya iyada sababta iyo ku biirinta fikradaha xunxun ee ka dhanka ah ninkeeda horeyba u xirnaa, marwalba fikirkaaga dhiib, marna taladaada; intaad dhageysaneysid waa inaad isku daydaa inaad mar kale diiriso, dhagteeda iyo aamusnaan, intaad dhunkato maqaarkeeda sida cunugga, waxaad ugu codsanaysaa inaad ku qanacsan tahay iyada, in ninkeedu yahay mid aan ku mahadin qiimayntiisa. kugu filan, sidaad nasiib u leedahay waa inaad iyada ku haysataa gacmahaaga, ECT, EC. ha is-jarin oo ha u sii deyn ninkaaga damaca leh, iyada ku nuugo ku xigeen iyo miyir la'aan, baakadaada afka geli oo u sheeg inay ku fiiriso indhaha dhexdeeda si ay u aragto sida aad ugu raaxaysato, waa inaad ku shubtaa iyada oo u dhexeysa xanuun iyo macaan, jilicsan oo lama filaan ah, kalgacal iyo murugo leh, ka dhig inay u raaxeysato sida qaniinyada oo kale, afar dhig oo afarteeda karbaash, sida digaaga oo kale, waxaad u jiideysaa timaha oo aad raadineysaa bushimaheeda, waxaad dhahdaa waxyaabo qalloocan dhagteeda, ugu dambeyn xaval, waxaan ku arkaa wax yar oo qallafsan markii aad si fudud u leedahay, laakiin ha iloobin hal shay, haddii aad hesho waxa aad yeelan doontaa xoogaa org Waxaan nahay dad aan la soo koobi karin, laakiin dhibaatooyinka sidoo kale way bilaaban doonaan, u qiimee xaval oo ha ku galin shaati kow iyo toban-rodol ah, kuma arko inaad aad ufiican tahay inaad ladhaqmeyso naagtaas, taxaddar
Waad salaaman tihiin, magaceygu ​​waa David runtiina waan jeclahay gabadha la qabo, wax badan waan wada hadalnaa oo waan baashaalnaa, laakiin ma aqaano sida loogu sheego inaan aad u jeclahay, waan ogahay inay iyaduna i jeceshahay, saaxiibkeed ayaa u sheegay aniga, oo waliba ah saaxiibkeey, laakiin iyadu waxyar ayey ka baqeysaa inay cuno cunug herror ah laakiin waan jeclahay oo waxaan doonayaa inaan ka guuleysto waxaan rajeynayaa inaad talo iga siiso emailkeyga ayaa ah weligood_27_07@hotmail.com
xeelado dhab ah oo wanaagsan, guushii laakiin waan ka fogaanayaa iyada aad baan u jeclaa ,,,,,,,,,,,,
Waxaan qabaa isla dhibaatada saxda ah. Waxaan ku waalanahay naag la qabo. Aniga ahaan, iyadu waa haweeney soo jiidasho iyo qurux badan oo mararka qaar igu adkaata inaan uur leeyahay quruxdeeda oo dhan. Way ila shaqeysaa waxaanan aqaanay muddo ku dhow 8 sano. Way ogtahay sida aan dareemayo maxaa yeelay mar aan la hadlay iyada iyo sifiicanba, waxay ii sheegtay inay sii wadayso jacaylka iyo qadarinta ay iga hayso wax kasta iyo inay jeceshahay ninkeeda…. taasi waa tii aan ka filayey inuu ii sheego. Ujeeddadaydu waa iyada oo ay taasi jirto, sanadihii la soo dhaafay waxaan horumarinay xiriirkan gaarka ah ee naga dhexeeya labadeenna (inkasta oo midkeenna aanu qiranayn) ... tusaale ahaan labadeenaba waan ka maseyrsan nahay haddii aan qof kale aragno, iyadu si ka badan ayey ii shukaansatay. mar qudha isla markaana aan si isku mid ah u aarguday, waxaan ahay qof si xeel dheer ula socda iyaduna kalgacayl bay ila tahay, haddii aan arko iyada oo ay weheliso ninkeeda ama gabdhaheeda weligoodba way dhab tahay oo hadhow ayay gacanta i qabataa ama i siisaa. Waa iska cadahay inaan wali jecelahay iyada… mararka qaarna sidoo kale waan aaminsanahay iyada…. Aad ayaan u jeclahay iyada ilaa heer ay awoodi kari weydo inay sameyso wax dhaawacaya qoyskeeda ama guurkeeda laakiin hadii ay isiiso tilmaamaha aan wax ku sameeyo laba jeer ka fakiri maayo maadaama aysan jirin wax aan doonayo oo aan ka badnayn dhunkashadeeda iyo jacayl u samee iyada.
Waxaan ku noolahay guriga sodohday sodohdayna waxay leedahay guri gooni ah oo leh wiil iyo gabadh qurux badan oo jeclaan lahaa habeenka oo dhan laakiin waxay iga dhigtay waali waanan ku dhiiran waayey inaan u sheego waxa a boqol aad ayuu u badnaa laakiin aniga waxaan jeclaan lahaa inaan galmo sameeyo iyo in yar oo jacayl ah, waxba ...
Hagaag, way igu dhacdaa aniga waxaan jeclahay naagta seedigey oo ma aqaano sida loo guuleysto, waxaan jeclaan lahaa oo kaliya iyada oo habeenka oo dhan aan jeclaado wax yarna isiino oo aan dhunkado tan caarada madaxeeda ilaa caarada ugu dambeysa ee faraheeda.
Haye, waxaan ahay Ales oo waxaan jecelahay dumaashiday runtuna waxay tahay hadaan la kaftamo mararka qaar waan dhoolacadeynaynaa laakiin ma ogi inay caadi tahay iyo inay wax tahay, walaalkay ma bixiyo iyada waxyaabaha ay jeceshahay ee ay rabto, runta ma garanayo waxa fiican inaan sameeyo haddii aan waraabiyo taasna waxaan siiyaa talo qabow x fas si aan u ogaado sida laguula soo xiriiro… ..
Haye, waxaan ahay Edgar oo waxaan jecelahay xaaska xaaskeyga, ma lahan naaso fiican.
Ujawaab edgar martines cortes
ammmm hello, ka waran noloshu waxay ku saabsan tahay socodka hareeraha adoo dhutinaya maxaa yeelay shabaqku ma garanayo sababta ay u jecel yihiin laakiin waxay u sameeyaan si aan qiyaas iyo wanaagsan lahayn, aaaaaaa in kasta oo aan jeclahay galmada afka oo ay si fiican ii nuugaan
isha kuwa aan qaado eeeeeeeeeeeeeeeee
maxaa yeelay wax weyn baan hayaa
laakiin maahan is tusid
darbiyada cesar montalvo dijo
eyyyyyyyyyyy laakiin waan jeclahay lalo
Jawaab Cesar Montalvo Paredes
WAAN KA JECLAHAY CUBBY BADAN, WAA GUUR, 10 SANNO AYAY JIRTAY, WAY IA SHAQAYSAA MA JOOJI KARO IN AAN EEGO AYAANA SIDOO KALE AYAY UGU WACTAA AYAANA SOO QAADANAYA LAAKIIN WUXA AY KA BAXAYSA INTA AAN KALOO KALAGAALO LAAKIIN AAN RABO IN AAN SII HADA SII SARIIR SOO SOO DHAWEYN INTA UGU SOSO BADAN IN AAN JECLAHAY WAX BADAN AYAANA JECLAHAY INDHAHA, ANIGU AYA JE FE Kormeeraha Halka Ay Ka Shaqeyso Iyadu Keliya Waa Shaqaale, LAAKIIN WAY I ARAGTAHAY WALIGANA AYAAN ARKAY ISKU FILAN. . Sideen ku kasbadaa inay iyada jeclaato oo ay kaligeyga ka dhigato xitaa hal mar oo keliya
Ku jawaab austin
Dhibaato ayaa i haysata waxaan jeclahay naag xaas ah, waxay leedahay gabar ay 1 sano jir tahay waa 22 sano jir, ninka qabaana waa 45 sano jir waxay wax barataa habeenkii, runta waligay uma sheegin inaan jeclahay iyo inaan anigu qof ahaan ugu jeclahay iyada durba Waxay ogtahay inaan aad u jeclahay iyada maxaa yeelay waxaan u diray waraaqo casaan ah, shukulaato iyo xayawaan cufan, wayna ogtahay inay aniga tahay oo waxaan u diray maalmo khaas ah sida Hooyada oo kale Maalinta iyo Maalinta Jacaylka.Waxaan kula kulmay ninkeeda meheradda oo aan aad u jeclahay, qof kastaa wuxuu ii sheegaa inaan si shakhsi ah ugu sheego laakiin waan baqayaa waxaan u baahanahay caawimaad
Waxaan jecelahay dumaashiday, labadeenaba waxaan aqal galnay waqti dheer, waxaan la yeelanay kulan shucuur ah laakiin kama aanan faa'iideysan, labadeenaba waanu is jeclaanay laakiin waxna ma dhicin, ninkeeda ayaa ka fura a badan oo aan ula dhaqmin sida ay u qalanto oo xaaskeygu ay aniga igu leedahay, waxba ma wadaagno, fadlan, maxaan sameeyaa
Waad salaaman tahay, runtu waxay tahay inaan la noolahay xaaskeyga waxaan ku noolahay guriga sodohdey waa 45 jir.
Waxay leedahay 3 carruur ah iyo nin aan wax fiican guriga ka qaban, kaliya seexdo. Wuu ka jeedsaday laakiin way cafisay… laakiin waxay la baxaan asxaabteeda oo waxay ka wacaan telefonkeeda gacanta laakiin waxay dhahdaa wax qalad ah ma geysaneyso… runtuna way iga masayrtaa….
Waxay leedahay timo jare adiguna waxaad leedahay asxaabteeda ...
Laakiin mararka qaar aniga waxay ila tahay inuu i jecel yahay, laakiin kuma dhicin inaan u sheego inaan jeclahay maxaa yeelay ma garanayo sida uu u dhaqmi doono ama si lama filaan ah ayuu ugu sheegayaa gabadhiisa inay iyadu dareento masayr hooyadiis ... maalin maalmaha ka mid ah ayaan ku casuumay inuu lahadlo oo uu xoogaa shahaado ah qaato waxayna igu tiri haa laakiin markii dambe waxaan wacay maxaa diidaya benia wayna ii jawaabtay si lama filaan ah ayay gabadheeda u qaadatay taleefanka gacanta oo ay dhibaato iiga dhigtay laakiin wey dhacday .. isbuuca kadib waxay u sheegtay wixii dhacay waxayna ku tiri maya Avia kon kien inay caruurteeda ka tagto… si fiican waa la soo dhaafay… laakiin hada wixii ka dambeeya shaki yar ayaa iga jira markaa ma sii taabanayo mowduuca mar dambe .. waqti yar oo aan qaato ayaan fariin u weydiinayaa iyada gabadhayda iyaduna waxay iigu jawaabtaa sida ugu fiican uguna macquulsan, laakiin waxaan kuu sheegayaa, ha u sheegin gabadhaada sababta oo ah way xaasidsan tahay, laakiin mararka qaarkood way ka baxsataa waxaan u malaynayaa ...
Kadib waxaan u diray fariin aan ugu mahadcelinayo sida wanaagsan ee uu u daryeelay gabadhayda waxaanan u sheegay in aan ku casuumay komer iyo in aan u soo lugeeyo socod laakiin isagu ma jecli gabadhiisa waxbana ma taqaano, way aamustay maxaa yeelay iyada gabadhu ima sheegan ... laakiin kamaanaan tagin Maxaan ugu idhi iyadaa ii sheegi doonta ... ilaa maanta ma garanayo waxaan sameeyo, ma kula tahay ... waxay igu tidhi waan fiicanahay markii aan dhibaatooyin kala kulmo gabadheeda, way ila ogolaataa ... Ma aqaano waxaan sameeyo, Saul, waxaan jiraa 26 sano ma aqaano haddii aan wacayo oo aan u sheego inaan ka helo ama ka codsado banaanka. .. laakiin waxaan ka baqayaa inay inanteeda wax u sheegto
Jawaab ugu dir saul crespo barreera
Waa salaaman tahay, waxaan kuu soo qorayaa inaan ku idhaahdo waxaan jeclahay naagta la qabo, iyadu aad bay u qurux badan tahay waana wax aad u fiican sida xun ee ay u guursato, waxaan markasta arkaa iyada oo ag maraysa ninkeeda oo gacmaha is haysta oo iyadu aad ugu muuqata jacayl ninkeeda Tilmaam inaan markasta ku riyoodo iyada maskaxdayda kama saari karo waxaan maalin walba ku hayaa maskaxdayda ma waxaad isiin kartaa talo si aan uga adkaado ama aan u ogaado inay iyaduna i jeceshahay, mahadsanid
Ku jawaab carlos rosales garcia
Waxaan qabaa dijo
Haweeneydu way ka dhib badan tahay intaas, ninka guuleysta waa sababta oo ah wuxuu ku soo beegmay xilli ay baylah u tahay nolosha haweeneydaas, ma jirto haween ku faaneysa inay tahay haweeney wanaagsan oo ku dhagaysan doonta, dariiqa kaliya ee ay tahay waa inay dhibaatooyin. Ha galin nolosha haweeney si aad u jabiso wax yar ama wax badan oo ay haysato, haddii aadan bilaabin inaad noqoto amiirkaas soo jiidashada leh ee aad ballanqaaday inuu noqon doono.
Jawaab ayaan u malaynayaa
fikradaha aad u wanaagsan …… ..mahadsanid
Taladu waa mid aad ufiican waxaanan moodayay inaan wax walba ogahay, runti waan ka helay iyaga, kaliya waxay ubaahanyihiin inay dhigaan sida loo sameeyo si uusan jaceyl u dhicin ...
Ku jawaab alex vega
Runtu waxay tahay, Ma aqaano waxaan sameeyo wixii dambe ... runtii waan jeclahay naagta la qabo ... ma joojin karo arageeda. Waan jeclahay inaan arko iyada oo ag socota mana caawin karo laakiin waxaan ka arki karaa badhida ama naasaha oo sameynaya. Waa maqaar naageed mana haysan karo, xitaa kuuma sheegi karo waxa aan dareemayo. Waxaan u baahanahay inaan iska iloobo tan (xitaa haddii aanan runtii rabin) maxaa yeelay waan ogahay inay ugu fiicantahay naftayda. Waxaan nafteyda siin lahaa si aan ula hoydo haweeneydaas…. hal habeen kaliya…
dhakhaatiirta cilmu-nafsiga ee guadalajara dijo
Fikradayda, waxaad haysataa wax kasta oo aad ku guuleysan karto haweeney xaas iyo guur la'aan leh liistadan aadka u fiican. Waan jeclahay qaabka macluumaadka loo soo ururiyey. Waxay sidoo kale aniga ila tahay in liiskan aad ku guuleysan karto lammaanahaaga marar badan. Xaqiiqdii adigu kuma khaldami kartid runtaas!
Kajawaab cilmi-nafsi yaqaanka Guadalajara
hello waxaan u maleynayaa in taladu ay wanaagsan tahay, si fiican ayey aniga iila shaqeeyeen, waxaan la joogaa gabar la qabo oo 18 sano jir ah oo aan ahay 42 jir, waxaan is aragnay 5 bilood ka hor waxaan u maleynayay inay kaliya i jeceshahay ilaa aan ka ogaado in jaceyl ay ku dhacday. aniga iyo aniga iyaduba, waxaan horey u leenahay xiriir bil iyo bar ah aadna waan ugu raaxeysaneynaa
Haye sidee tahay adigu horta maqaalkan ayaa caqli buuxa! naag xaas leh oo guursatay in kabadan 1 sano ninkeeda ayaaba dayacay ninkeeda !!! Nin walibana dhagaxuu doonaba ha ahaadee, inta uu si qurux badan uhadlayo oo uu lafahansanayo iyada, wuu dhacaa waayo wuu dhacayaa! Waxaan ku jiraa xaalad sidan oo kale ah .. Waxaan la joogaa gabar la qabo, waa 24 sano jir iyaduna waa 4 jir, waa shaqaalahayga waxaanan ku bilaabay inaan u keeno quraacdeeda, oo aan ku marti qaado inay wax cunto, waxaan ku bilaabay kaftan iyada, iyada oo u sheegaya waxyaabo fiican iyada, si faahfaahsan qaarna ulana dhacay !! Hada sifiican ayey jaceyl uqabtaa laakiin anigu ma guursanin !!!! hehehe b .laakin ma dayacayo xaaskeyga maxaa yeelay way yartahay !! nasiib wacan qof walba !!!
Ku jawaab danny mxli
Waxaan shukaansanayay 8-dii bilood ee ugu dambeysay gabar qurux badan oo 40 jir ah oo xaasle ah oo leh 3 caruur ah, waxaan ahay 51 sano waxaan kala maqanahay xaaskeyga mudo 7 sano ah. Kaliya waxaan rabaa inaan kuu sheego in xiriirku uu ahaa mid aad u qurux badan oo waayo aragnimo fiican leh, waxaan ku bilownay saaxiibtinimo laga sameeyay shabakada, in kasta oo ay tahay haweeney muxaafid ah waxaan kuu xaqiijin karaa in qodobka halkaan lagu sharaxay uu dhab ahaantii run yahay, waxaa laga yaabaa inay leedahay wax walba laakiin shucuur ahaan iyo galmo ahaanba Waxay ku dhacday jadwalka ninkeeduna ma qadariyo sida ay u qaali u tahay, xitaa haddii ay la socoto rodol dheeri ah waxay umuuqataa mid soo jiidasho leh, suurad wacan. Hadda, illaa iyo hadda waan dulqaatay, maadaama aan kaliya tagnay filimada, jardiinooyinka qaar iyo makhaayadaha ayaa isku raacay inay waxyar ka qabtaan, waana arrin maalmo kooban ah in la caddeeyo xiriirkeenna sida ugu wanaagsan ee hudheellada Monterrey. Dhunkasho aan ku sameeyo Dumarkeyga Qurxoon, waxay noqon doontaa wax aan la ilaawi karin markaan wada joogno.
Jawaab Ruben AS
isku aadka dijo
Maqaalkan kadib istiraatiijiyadeyda inaan ku duufsado haweenka la qabo ayaa la xoojiyay. Hal qayb oo aan kugula talinayo waa in la abuuro magac ay wada fahmi karaan labadiinaba
Jacayl baa i haya dijo
Maqaal wanaagsan !! Waxaan rajeynayaa inay ii adeegto maxaa yeelay waxaan doonayaa inaan guuleysto haweeney la qabo, iyadu waa deriskeyga, waa 35 jir waxaan ahay 23 jir, kaliya waxaa jira dhibaato kale oo yar: anigu waxaan ahay haweeney !! Waxaad arki doontaa inaan guuleysan doono, ka dib waxaan kuu sheegi doonaa sida ay wax u dhaceen 🙂
Ku jawaab Enamorada
Waxaan u maleynayaa in aan ku jahwareersanahay haweeneyda aan lashaqeeyo duruufaha nolosha awgood waa inaan noqdaa dhinaceeda waxaan ka fakaraa sidii aan u sameyn lahaa jacaylkeeda laakiin mararka qaar waxaan dhahaa sax maahan maxaa yeelay waa saaxiibtey xaaskeyga laakiin si kastaba ha noqotee Ma aqaan wax kale oo aan ku sagootiyo
Aad ayaan ugu raacsanahay qoraalka sida loo sasabayo haweeney la qabo laakiin waxaan aaminsanahay ka hor inta aan la bilaabin furitaanka waa inaad ogaataa ninka markaa qofku wuu ogaan doonaa cida maamulaha ay tahay inuu daryeelo. midba midka kale oo siinaya talaabooyinka Mensioned waxay ku qabtaan gacanta qaab salaaxid ah iyo salaanta waxay ku siinayaan dhunkasho qoorta laakiin dhunkasho qoyan oo ay dareento in la dhunkaday iyo wakhti kasta oo ay la hadasho in codkeedu yahay mid sasabasho leh oo aan joojinayn indhaha indhaha iyo macasalaamayn kasta intaan la gaarin cilaaqaadka dhow xusi weedha ah jacaylkayga waan ku jeclahay waxaan rajaynayaa inaan markale arko oo isoo waco, markii xiriirku gaadho hadduu yahay qoladiisa, ma si aad wax badan u hagaajiso haddii nadaafaddiisa la ilaaliyo laakiin xoogaa aan nidaamsaneyn guri caadi ah oo ah Nin keligiis ah muddo gaaban, waligaa ha xafidin sawir dumar kale oo laga soo qaaday waqtiyadii la soo dhaafay ee la soo dhaafay haddii ay jiraan sawir adiga ama adiguba leh laakiin kan qolka qof kale uusan ku arki karin, iyada kaliya marka ay wadaagayso a n adoo leh fudeyd aad u fudud laakiin kalgacayl jacayl leh, waad ku mahadsan tahay inaad ii ogolaatay inaan ra'yigayga ka dhiibto alejandro had iyo jeer raalli ahaanshaha jacaylka fikirka ..
Hello Carlos, fiiri haweenka, saaxiibbo malaha, marka ay timaado rabitaan iyo raaxo, sidoo kale ma eegaan da'da ninka ay rabaan inay ku raaxeystaan, sida xaaladdooda guur aysan aheyn, laakiin waxaan dhihi karaa ragga guursaday , Haweenka xaalad kasta oo ay raadsadaan, Mid ka mid ah guursashada darteed ayaa ah mid caqli badan, mid kalena maxaa yeelay waxay ku noolyihiin nolol galmo firfircoon waxayna ku raaxeysanayaan in badan oo dareenka ah ee ku raaxeysiga ninka kale iyo mid kale maxaa yeelay waxay ogyihiin in haddii ay dhacdo in mid ka dheer uu shahwado, markaa horay sii maqaar si aad u wada shaqeysid oo ugu raaxee si buuxda, ka tag sumaddaada si ay had iyo jeer u yeelato dareen kuu dhow iyo xusuus lama ilaawaan ah oo si fiican u socon doonta Alejandro…
Aad ayey u qiiro badan tahay akhrinta maqaalka noocaas ah, waxaan shukaansi la lahaa haweeney xaasle ah muddo 4 sano ah wax walbana waan ku noolaannay, waana ku faraxsanahay taas…. kaliya dhibaatada yar iyo tan weynba waxay tahay inaan jeclaaday iyada waxaan bilaabay inaan maalin walba u baahanahay iyada oo aad iyo aad u badan, mararka qaar waxay ila muuqataa qalad aniga inaan sii wado ninkeeda, laakiin maxaa la sameeyaa markii lala joogo waxaad dareemeysaa inta ugu badan nin adduunka laga jecel yahay .... salaan ... tijaabo aad ufiican.
Ku jawaab cop
Waa salaaman tahay, waan guursaday waxaanan la baxayaa wiil 25 jir ah, tg 44, wuxuu ii sheegay inuu aad u jeclaa laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayuu arkay gabadhayda oo uu qirtay inuu ka helay…. I ma garanayo waxa la sameeyo, runta ayaa ah inuu isaga jeclaaday
Waa salaaman tahay Yoana dijo
Waxaan la yaabanahay haddii aad rabto inaad ballaariso saaxiibadaada, waxaan u maleynayaa in wiilkan uu yahay mid dabiici ah inuu u arko sidaas maadaama uu ka yar yahay waxaan ahay nin qaan gaar ah oo 44 jir ah waxaanan raadinayaa saaxiibo aan la hadlo maxaa yeelay waxaan dareemayaa inaan ahay nafteyda waxaan ku waayey kaliya shaqeynta oo ma lihi saaxiibo marka waxaan kuu soo bandhigayaa asxaabteyda hadii aad xiiseyneyso waxaan kaaga tagayaa emailkeyga elnortonmx ee yahoo.com.mx
Ku jawaab Hello Yoana
SALAAN ASXAABTA WAXAAN KU SOO BAXAY XAALAD ISKA MID AH, AYAAN KA OGAHAY 5 BILO AGOOD WAA XAASKAYGA INA AY EY ILA ADEERTAY WAA 36 AYAAN AHAY 23 RUNTA WAQTIGAAS OO DHAN IN AAN U SHEEGI WAAYO JOOGTAYDA AYAY AHEYD KUNA Kun OO SAACADOOD AH, AYAAN WAXBA SIinin, WAXAY UMALAYSAA IN AAN KU JECLAHAY JACEYLKA QODOBKA RIYADA AYAAN KA FIKIRO MAALINTA OO DHAN AMA ISKU DARSADA DUMAR KALE AMA AYAAN ARAGAYO JOOGEEDA KALE IN AANAN HILMAAMI KARN, MARKII AAN KA BAXAY MEESHII AY KU NOOLAAHAY, WAXAY IIGU SHEEGTAY IN AY I DIIDI DOONTO, IN AY ISTICMAALAY IYO HADII AANAN U TAGI LAHAYNA AY II TAHAY, KII AYAAN AHAY IDIOT HADA UGU SHEEGO UMA maleynayo inaad iga xiisay taasi oo dhici doonta maalmo kooban oo ay dhici doonto, laakiin hada oo aanan arkin, waan ka sii fikirayaa wax badan ,,, TALO
PUNER PUNK dijo
XAQIIJO !! faallooyin aad u fiican, waayo aragnimadayda waxaan kuu sheegi karaa inaan ahay dhakhtar, dumarka da 'kasta ha lahaadeene waxay yimaadaan xafiiskayga, qaar badan oo ka mid ahna waxay leeyihiin cilado badan oo xagga shucuurta iyo galmada ah, iwm. Sanad ka hor ayaan guursaday oo waxaan ku dhaartay inaanan mar dambe la joogin qof xaas leh ama aan la yeelan doono gogol dhaaf. INKastoo aanan ilaawin naagtayda, ugu dambayntii waan kufsaday, waxaan doorbidayaa dumarka isqaba inay noqdaan kuwa taxaddar badan. Dhakhtar fiicanna waan ilaaliyaa dhammaan sirtayda xirfadeed. MAANTA WAXAAN SIILAAL AH U SIIYAY DUMAR BADAN OO GUURSAN, JACAYL AYAAN KA LEEYAHAY TO TALOOYIN KU SAABSAN QOF KASTA: IN LAGA WAYO, WAA LA siinayaa…. DUMAR MAYA, SI KASTA OO AY UGU SOO DHAWEEYAAN TAHRIIBTAN IYO ISTARAATIIJADAN. MARKII UGU DAMBEYSAY DIIWAAN BADAN, WAA XEERKA DAHABKA ... XATAA WAALID
Jawaab PETER PUNK
Waxaan rabaa inaan la kulmo gabadh wax i baraysa wax kasta oo nolosha ah iyo inaan wadaagno waxyaabaha waalidnimada
Jawaab adrian hernandez martinez
Horey ayaan uqoray kahor intaanan ilaawin inaan katago taleefankayga lambar 0445512904996 Aten. adrian hernandez martinez
SI FIICAN U SII HAHAHAHAHA
Jawaab ELSA BROSON
Waad salaaman tahay, sidee u aragtaa xaaladdeyda, waxaan jeclaaday gabar 26 jir ah oo xaasle ah, waxaan aqaanay muddo 6 sano ah iyaduna waxay wax ka ogtahay dareenkeyga 3, waxaan leenahay shaqo cayiman xiriir, muddo kadib waxay bilawday inay wax dareento aniga, iyaduna waxay isqabeen mudo 3 sano ah, maalmahan ugu dambeeya waxay bilawday inay ii cadeyso inay iyaduna jacayl igu dhacay, waxkastoo ka sareeya waan arkaa iyo dhamaan ficilkaas sasabashadu waxay dhacdaa intaanu shaqada wada soconno, dhibaatadu waxay tahay markay iyaduba la joogto reerkeeda ama shaqo la’aan tahay, waxay dareentaa qoomamo waxayna ii sheegtaa inaan ka fogaado, in qoyskeedu ka qiimo badan yahay intaas ka badan, dabcan waan fahmay iyada waayo waxaan u malaynayaa isku mid, laakiin si kastaba ha ahaatee ma doonayo inaan lumiyo iyada. Aad ayey u wareersan tahay, waxa iigu dambeeya ee ay ii sheegtaa waxay tahay iyada oo aan garanayn waxa ay rabto maxaa yeelay haddii ay rabto ninkeeda ima fikireyso aniga, haddii ay i jeclaan lahaydna way ila jiri lahayd, si kasta oo ay tahay ... waxaan jecelahay inaan ogaado haddii ay si dhab ah ii jeclaatay ama haddii aan kelideed iskaga tago, si fiican waan isku dayay laakiin ma awoodo ,, salaan
Jawaab JUAN CARLOS GONZALEZ
GANACSI BILAASH AH dijo
Nabadeey J Carlos
Waxay ila tahay aniga inaad u ogolaanayso inay go aansato oo aadan ku cadaadinin dareenkaaga.
Way cadahay in shucuur ahaan aad saameyn ku yeelatay laakiin iyadu wax badan oo ay lumiso ayaa si lama filaan ah ugu qalmin
Jawaab BILY GUERRERO
JUAN CARLOS QAALI AH: Ha weydiinin !!! Haddii haweeneydaasi ay ku xiisayso, u tag iyada, wax aad muhiim u ah inaad faallo ka bixiso ayaa ah inay yar tahay wax aan go'aan qaadan karin, taas oo ah, waxaad ka dhigtay iyada dabacsan, waxay ka shakisan tahay xiriirkeeda hadda jira iyo adiga ... waa lagama maarmaan in la weeraro laakiin xoogaa aragti ah ... Sida nin wanaagsan oo wanaagsan, ubax u keen oo u sheeg inaad ka tanaasushay iyada, HALKAAN Waad KU QAADI DOONTAA IN AY KU DHACDO CUDURADAADA OO KALIYA AAD KU GUULEYSATO, HA SIinin QARAX ... SII SII WAA AY DHACDAA… WAAN DAMBALAYNAY, LAAKIIN XEERKA DAHABKA AH WUXUU NOQONAYAAN AQOON BADAN, WAAYO LABADU WAA KADHACI KARTAA QIIMO BADAN QOF KHIBRAD LEH AYUU KUU SHEEGI DOONAA ... NAFTAADA AAMIIN OO KAARKAAGA SI Wanaagsan Ula
xaqiiqdii waa maxay maqaal wanaagsan iyo maxaa faalo fiican ah, inkasta oo ay run tahay mararka qaarkood haweenku waxay na siiyaan baalal, laga yaabee inaysan jarin haddii la cabiro, waxaan ku guda jiraa hanashada haweeney xaas leh ilmo 6 bilood jira oo ninkeeda ayaa muujinaya inay ku dul socoto liiskaaga. Waan ku faraxsanahay waxaanan bilaabay inaan la noqdo tafaariiqle (hadiyado) iyada iyada oo ay jeceshahay intaas oo darajo ah oo aan ula qabsado faahfaahintaas oo markaan u tago iyada oo aanan u keenin waxba, ayay i weydiisaa ama sameeysaa kaftan intaas leh! Ma jeceshahay faahfaahin oo wuxuu ku jiraa ku-biiritaanka mise waa xiiseynayaa ???? Sida iska cad markan wuu ogyahay inaan xiiseynayo laakiin ma aanan haleelin maxaa yeelay waxaan rabaa inaan si tartiib ah ugu raaxeysto!
Waxaan cadeynayaa inay ogtahay in booskeyga dhaqaale ee ka duwan iyada iyo ninkeeda ay fiican tahay.
Faahfaahin kale markaan ka hadlayno isagu weligiis ma xuso ninka, markuu hadlayona wuxuu isu sheegaa inuu yahay "gabadha aabbaheed". Salaan kadib waan ku qanacsanahay fikradahaaga
Ku jawaab pepegrillo
FAARABUNDO MARTI dijo
Markii aan yaraa oo aan bikro ahaa, mid ka mid ah ilma adeertay ayaa ku qurux badnaa (ina-adeer siyaasadeed), beddel ahaan seyga (ina-adeerkaygii ugu horreeyay) wuxuu la sheekaynayay gabar kale. Xadgudub kalinimo ah ayay igu dhibtay, waxay xirtay minis, nigis ma leh…. waxay ahayd haweeney brama ah !!! Aniga oo aan khibrad fiican u lahayn, waan baqay oo wejigayga ayaan qaaday, ilaa maalin wanaagsan oo aan daalana waxaan go'aansaday inaan tago dhamaadka. Maalintaas waxaan waayey dambi la'aan, way guursatay laakiin si aad ah ayaa loo daryeelay, waxaan qirayaa inay iyadu ahayd macalinkaygii, waxaan ahayn dad isjeclaa in ka badan 5 sano, inaadeerkay oo wata guushiisii, ma uusan doonayn inuu ka qaybgalo tiisa ganacsi ... MAANTA waxaan arkaa in markay haweeneydu go aansato inay foodaaraha naftaada saarto, isagu ma bixinayo dadaalo ... WAQTIGA KA QAADASHADA, QANACSASHADA AMA WAAYO JACAYLKA DHALASHADA ...
WAAN dhihi karaa midna ma doorto dumarka wax dhiba, ama kuwa wax dhiba, waa iyaga kuwa go’aamiya xaaladaan, mid baa bilaabi kara laakin aakhirka ay cayimaan ...
MA AHAAN WAX KA BADAN BADAN MIDNIMADA IYO DIBADDA ...
Jawaab FARABUNDO MARTI
Marwalba waxaan khibrad fiican u lahaa gabdhaha ka soo jeeda dugsiga sare, dugsiga sare, iyo kuleejka. Markii aan dhammeeyey xirfadayda dhakhtarka ilkaha waxaan ahaa 25 jir, gabadh saaxiib ah oo aan aad u jeclaa isla markaana aan ku fikiray inay guri ka bilaabaan. Waqtigaas waxaan ahaa Masiixi, iyadu sidoo kale way ahayd inkasta oo aan ku adkahay diinteyda iyo waxa aan aaminsanahay, haweenka ka baxsan diintayda diinta ayaa igu wareeray. Xitaa gabdho kale oo walaalo ah oo kaniisada ka mid ah ayaa ila shukaansanayay. Mar uun, gabar walaashey ah ayaa i weydiisatay ballanta ilkaha, qiilkeeduna wuxuu ahaa in aan daaweeyo saaxiibkeed ... Walaashaa aad ayey iigu dhowaatay aniga, kaliya weligay ma siinin iriddeeda, hadal la'aan ayaan ahaa markii aan la kulmay saaxiibkeed, waa waxay ahayd layaab haweeney, kaliya taasi iin leh (guursatay iyo gabar yar). Waxay ku dagaalameen asxaabta dhexdooda, waxaan bilaabay inaan shukaansado GRECIA FABIOLA, waxaan u jeclaaday iyada si aan waligey noloshayda oo kale ugu dhicin, waxaan kudhamaaday saaxiibteyda kiristaanka ah, waxay iga ceyriyeen kaniisad, qoyskeyga oo dhan ayaa kasoo horjeeday xiriirkan xaaraanta ah iyo kan xaaraanta ah ka yar iyada iyo aniga, waxaan ku noolaa idyll, jacayl weyn, in kastoo haa ... cawaaqibkeeda ayay yeelatay. Wax yar ka dib markii aan baxay waxaan bilaabay inaan ku raaxeysto galmada madaama aanan waligey u riyaaqin ilaa maanta, waxaan uureeyay iyada tan ugu xumeydna waxay ahayd markii qoyskeeda siyaasiga ah ay ogaadeen, tan maxaa yeelay waxay tagtay isbitaalka, uur qatar sare leh awgeed ... ninkeedii ayaa kaxeystay, kadib markuu jabiyay Hooyadeey !!! Shaqada way iga ceyriyeen, asxaabteyda wey ila joogeen ila hadalka, qofkii uguhoreeyay ee iga leexleexaa wuxuu ahaa hooyadey, ficil ahaan waan lumiyey wax walbo, wax walbo, caqiidadayda, ceebteyda, iskaba daa saaxiibteyda aan guursanayo iyo yaan halaagay…. Maanta waxaan ku noolahay deganaan inkasta oo ay u egtahay sheeko, waa run. XUSUUSNO JACAYL BADAN, WAAN KU XASUUSAYAA GRECIA FABIOLA JIJÖN VERGARA, CIDNA AYAA KA HOREYSAY INAAD KA HOREYSID, MIDNA KA DAMBAYN INTA KA DANBAYSA INTII AAD GUURSAN TAHAY.
Ku jawaab juan hernandez
Cornelius Lligikota dijo
Waxaan jecelahay haweeney xaasle ah laakiin ma aqaano qaababka aan u adeegsado si aan ugu guuleysto. Ma iga siin kartaa talo FB
Jawaab Cornelio Lliguicota
Waan jeclahay haweeney xaasle ah laakiin ma aqaano qaababka aan ku guuleysto.Waxaan soo wada shaqeynay seddex sano.
Si aad u wanaagsan ayaan mar hore u sheegay inay aad ii jeceshahay Laakiin markaan doonayo inaan dhaho ereyo jacayl ah aad ayaan u xishoodaa
Waxaan rabaa inaad talo iga siiso
mudane yigolo cajiib ah xiriiriye, wax badan ayuu iiga adeegi doonaa dhaqamadayda cusub. Had iyo jeer waxaan dhihi jiray waan idhi oo waxaan dhihi doonaa, haweenow, annaga ragga ayaa muhiim noo ah, iyo in ka badan guriga ...
heshiis weyn waxaanan sugayaa talooyin kale oo tusaalooyin ah
Ku jawaab cristian ba
Ha ilaawin inay muhiim tahay haweeneyda inay dareento kalsooni iyo qof kalsooni ku qaba nafteeda.
Xaaladdayda marwalba waxaan raadsadaa biyo xireen, waa mid aniga igu abuurtay ... Marwalba waan i dhibayaa waana kan iga horjoogsanaya inaan iligayga geliyo. dhawaan mid ayaa ku dhacay oo aan baarayay muddo sanad ah ... Supestamente jaceyl ayey u qaaday, waxay ii sheegtay inaan nolosheeda baabi'iyay ... .. laakiin waxaan xiriir la yeeshay hal mar oo kaliya mana sii wado maxaa yeelay xaaskeyga mar hore ayeyba jirtay wuu i qabtay waxaanan leeyahay ilmo guurka ka baxsan. Waan ka xumahay inaanan sii wadin iyada, laakiin waxaan geli lahaa xaalad aad u weyn
Jawaab Guillermo URbanos
Kiiskeygu waa, waan jeclahay gefahayga laakiin waa xaasle leh 2 caruur ah, waxaan ahay 21 sano jir iyaduna waa 29 jir, maxaan sameeyaa? ... Waxaan raacayaa iyada muddo labo sano ah hadana waxaan ogaaday inaan iyadana jeclahay badan, waxaan dhihi lahaa. Fadlan haddii qof awood u leeyahay inuu i caawiyo e-maylkayga zxavier-13@hotmail.com
In kasta oo aan dhakhtar ahay, waa inaan qiraa inaan ahay ugu horreyntii nin, ka dib markii aan la ildaran cillad xagga shakhsiyadda ah, WAAN SAMEEYAY, sida ku cad aragtiyaha maskaxda iyo buugaagta sida dib loo eegay DSM V, iyo CIES 10…. Sikastaba, waan qirayaa, laakiin waxa dhabta ah ee ku saabsan ayaa ah in markaan haweeneyda ula dhaqmo sidii bukaan ahaan, waxa ugu horeeya ee aan ka fikiro inaan sasabto, hadii ay guursato wax badan. Waan ogahay inay tahay mid anshax xumo ah, runtiina waxaan dhigay sariir badan, kuwa aan jeclahay waxay udhaxeeyaan 35 ilaa 45 sano jir. Sida ay khubaradu sheegeen, waxay leeyihiin xiriir xiriir ayaa la sameeyaa halka bukaanku u nugul yahay, dhakhtarkuna waa kan xukuma, ama gacanta sare leh, kuma koobna oo keliya baaritaanka guud, naasaha, caloosha, siilka, iwm; laakiin sidoo kale qaybta wax ku oolka ah, galmada oo aad ka ogaato cilladaha, khiyaaliga iyo jahwareerka badan, hadda waxaan arkay inay ahayd inaan naftayda u hibeeyo xirfad kale, maxaa yeelay waxaan garwaaqsanahay inaan ahay qof aad u itaal daran ... si kastaba ha ahaatee sababo sharci awgood geli karaa dagaal aad u weyn, kaliya in Si taas looga fogaado, waxaan ahay doqon aan ku bilaabo kasbashada kalsoonidooda, ka dib waxaan isku dayaa inaan naftayda iibiyo oo naftayda lagama maarmaan u noqdo, waxaan isku dayaa inaan abuuro ku tiirsanaan ka dibna miiska waa set ... taasi waa inta dumar ah ee soo maray noloshayda, waxaan ku bilaabayaa gacmahooda, xiriirkan fudud ayaa dilaya, ka dib wuxuu u ogolaaday iyaga inay ficil rabaan tanna waxaan ula jeedaa dhunkasho, ka dib waan ku jees jeesayaa iyaga sidaa darteed way codsadaan sariir ...
Ma caawin karo, haweenku waa dumiyeeyga
Waxaan dareemayaa xumaan, ma i caawin kartaa?
Hello Ana, noo sheeg sida aan kuu caawin karno
Ku jawaab ponciano
Waxaan rabaa inaan waxbadan ka barto sida loo guuleysto haweeney xaas leh
Akhrinta maqaalkan ayaa iga xishooday. Waa casuumaad sinada iyo gaalnimada. Waa maxay xishood la’aan.
Ku jawaab Braulio
ha noqon quer
IIMAANKII CASTELLON dijo
Talooyin aad u fiican… .mararka qaar qofku ma eego «duruufaha» si fudud loo siiyo ... Waxay iga caawineysaa inaan dumarka aad u qiimeeyo oo aanan ka qoslin ... ula dhaqmo sida dumarka dhabta ah.
Ku jawaab FE CASTELLON
Maya, maxaan dhihi karaa…. Waxay ka kooban tahay dhiirrigelin waxayna kaliya doonayaan inaan seexanno, wixii aan akhriyay iyo si fiican well. Waan u hambalyeynayaa maxaa yeelay hooyooyinkood sidoo kale waa la guursaday, taas oo aan kula talinayo qof walba! ° !! Waa inay aadaan dugsiga hoose si ay u bartaan qorista oo aysan u noqon jaahilnimo, iyo sidoo kale waxaan u maleynayaa in dhammaan kuwa halkan wax ku qora ay fool xun yihiin maxaa yeelay waxay jecel yihiin kuleylka, sida loo yiraahdo ... waa hagaag, caano qof kale !!!! Suurtagal ma ahan inay u maleynayaan in haweeney xaasle ah ay rabto inay sidaan oo kale u lalowdo mid idinka mid ah, haddii ay sidaas dhacdo dhammaan kuwa ku guuleysta qabsashadu way ka fududeysan doonaan. Laakiin haye, waxay jecel yihiin inay fududahay taasna si dhakhso leh ayey u dhacdaa.
Iskuulka aad !!!!
hahahahaha !!! HAHAHAJAJAA! Laakiin aan aragno…. Waa maxay manga aan caqli lahayn! 3 faro gelin mooyee, inta kale waa "murugo". "Maqaalka" (sida qof ugu yeero) waa mid si qoto-dheer u fudud ... dhinaca kale (waxaa laga yaabaa inaad dareentay inaan ahay DUMAR), waxaan ka baqayaa inay rag badani u qaataan sadarradaas sidii wax xiisa leh oo aan khaldami karin!
Mudanayaal, haweeney kastaa way ka duwan tahay. Guur kasta waa ka duwan yahay. Way iska cadahay in qaar ka mid ahi ay "wax" u waayaan noloshooda guurka oo ay suuragal tahay in qaar ka mid ahi ay noqon doonaan "kuwo la heli karo", laakiin xaqiiqadani waa XAALADDA AADANAHA NADAAFADA, EE AAN AHAYN XAALAD DUMAR
Waxaan qabaa aragti ah in "maqaalka" ay tahay inuu qoro qof aad u da 'yar iyo / ama aan khibrad lahayn. Sida mid ka mid ah faallooyinkaaga ay leedahay: »Waxaan dhihi karaa midna ma doorto dumarka uu mid ka mid ah nasiib-darrooyinka ().) Mid baa wax bilaabi kara laakiin aakhirka ayay go'aamiyaan…». Dumarku had iyo jeer way ogyihiin marka "la sasabayo" qaar badan oo iyaga ka mid ahna way ku farxaan oo waxay u oggolaadaan "la sasabasho" iyada oo aan macnaheedu ahayn inay sii dheeraanayaan (waxay ka duwan tahay ragga badan ee "xeeladaha" iyo kaabbadda yar ee shabagyada dheddigga ah).
Niman yahow, marwooyin ... KA DIGTOONOW, fallaadhihu waxay u kala baxaan labada dhinacba oo maskaxda ku hayaan in dumar badani ay jecel yihiin inay yeeshaan "saaxiibo" (hehe) digtoonaan iyo "isfaham" ay la yeeshaan weligood, weligoodna hore ugu socon. Waxaan tan ugu idhi kuwa iyagu raadinaya wax ka roon. Qofkii dab ku ciyaara, ayay yiraahdaan, wuxuu ku dambeeyaa gubasho!
Sikastaba, nasiibka ugu fiican dhamaantiin (waad ubaahnaan doontaa!) Hadana hadii aan talo helo, ha iska dhigin inaad taqaano dumarka guud ahaan. Mid diirada saar waxaadna yeelan doontaa hawl intaad nooshahay!
waaw! Bishaas waxaad ka tagtay eeddo oo yaaban ... aad baad u saxantahay ... waxaad tahay naagta ugu dhow kaamil ahaanta ... kaliya adiga ayaa cillad leh ... »FUCK !! WAAD GUURSATAY !!! LOL
Ka jawaab si aad u fajaciso
QOFKA I SOO ​​DIRAY WELI WUXUU LAGA HADLAYAA MAXAA DHACAY, MAADAAD AY TIRI AYAY U SAMEYSAY IN AY SAMEYSO OO AY SOO weydiisato wax aan u maleynayo in aan inta badan macquul aheyn in aan gaaro. * Adiga naftaada u sheeg magaca qofka kaliya ee ka soo horjeeda jinsiga kale ee aad rabto inaad la ahaato (seddex jeer ...) ... * Ka fikir wax aad rabto inaad ku guuleysato usbuuca soo socda isla markaana ku soo celi naftaada (lix jeer ) ... * Ka fikir wax aad rabto inaad ka dhex dhacdo adiga iyo qofka gaarka ah (oo aad ku tiri # 1) oo aad naftaada u sheegto (laba iyo toban jeer) Now * Hada sameyso hamiga ugu dambeeya uguna dambeeya ee ku saabsan rabitaanka aad dooratay . * Markaad tan aqriso, waxaad heysataa 1 saac oo aad ugu dirto 15 mowduuc wixii aad codsatayna waxay ku rumoobi doonaan 1 toddobaad gudahood. Markasta oo dadka aad u dirto, waxa sii xoogaynaya rabitaankaaga. Haddii aad doorato inaad iska indhatirto warqaddan, ka soo horjeedka rabitaanka ayaa kugu dhici doonta, ama tanina weligeed dhici mayso .. Maalmahaagu ha ka buuxsamaan wax qabad iyo riyooyinkiinna habeennada ah nuqul oo ku dheji 15 ama + mawduucyo
Ku jawaab lu
Haweeney kastaa way dhici kartaa waqtiga ugu yar ee la filayo Claudia Ma arko wax aan qaan gaarin khadadkan oo la qoray bilowgii runti waxay ka sheekeyneysaa wax kasta oo ay tahay in la sameeyo waxayna kuxirantahay qof walba inuu leeyahay aragti uu ku dabakho talada. Waqtiga ugu badan ee taxaddar leh, cilaaqaadka oo dhami waxay leeyihiin kacsanaan iyo hoos u dhac waxa ugu weyni waa in la kasbado kalsoonida dhibanaha su'aasha laga qabo si iyada lafteedu ay kuu sheegto goorta la weerarayo, kuwa kaliya ee aan dhicin waa kuwa xagga ruuxa ka xoog badan Eebbe u go'ay laakiin sida adduunkan loo joogo dadka intiisa badan waa laga illaaway Ilaahay oo waxay aad uga walaacsan yihiin badbaadadooda qof ahaan, si fiican waad qiyaasi kartaa waxaan u maleynayaa inaan yara xanuunsanahay waan ku raaxaystaa sasabashada haweenka la qabo iyo markaan ku qanciyo inay wax la yeeshaan aniga si fudud ayaan u soo celiyay hahaj waxaan ka helaa inbadan oo kuwa ku faano in aysan waligood wax sidan oo kale ah sameyn doonin ka dibna salaanta ayaa dhaceysa, sida iska cad haweenka marwalba hal talaabo ayey naga dambeeyaan
Ku jawaab soprano
Haye, waxaan hayaa khiyaali gabadh 35 jir ah waxayna leedahay gabadh yar oo 16 jir ah wayna ila shukaansadaan oo waxay ku noolaadaan gurigayga hortiisa laakiin ma aqaano sida loo sasabo 2 isla waqtigaas oo aan u yeesho gurigooda i geli
Marwadu mar bay i taabatay waxayna ii sheegtay inay guska iga jeceshahay gabadheeda ayaa si qalad ah xagal afkeeda iigu dhunkatay runta ayaa ah inay labadooduba leeyihiin jidh aad ufiican maadama ay leeyihiin laab weyn iyo badhida quruxda badan
I caawi, maxaan sameeyaa? Ma aqaano wixii dambe inaan sameeyo
emailkaygu waa joaquin_daz@hotmail.com
Waxaan hayaa 16
Haye, waxaan aadayaa kulleejo waxaanan la kulmay gabar aan aad u jeclahay, laakiin way guursatay, waxay ii sheegtay inay dhibaatooyin kala kulanto ninkeeda, waan jeclahay iyada, laakiin waxaan u maleynayaa inaysan ii muujin xiise aniga, ama aniga ma aqaan sida, ma aqaan sida aan ku aqaano waxa aan kala hadlayo, iyo ps ma joojin karo ka fikirkeeda, iyadu waa waalan tahay, waxay i siisay 3 dhunkasho oo aan afka ugu sheegay. inaan saaxiibo nahay oo ay igu qaadatay waqti in jawaabta la i siiyo waxay ahayd haa laakiin hal shuruud oo ah inaan caqli galno, laakiin waxaan ka codsanayaa dhunkasho ama habsiin mana doonayo inuu i siiyo ama wuu i siiyaa dhunkashada dhabanka iyo habsiinta sidii ay ahayd maalintii dhalashadayda.
Ma aqaan waxa la sameeyo si ay aniga ila mid noqoto.
Waad salaaman tihiin hadaan ahay Natan reer Rcia Chaco runtiina waxaan u markhaati furayaa dhamaan ereyadan melozas xq sidaa darteed haweeneyda waxaa loo abuuray shirkada ninkeeda wixii ka baxsan heerka arxan darada ah ee laga yaabo in nin ahaan aaminsanahay inay leeyihiin. Sababtaas awgeed, waa inaan yareynnaa macho ahaantayada oo aan ka dhaadhicinnaa waxa lagama maarmaanka u ah haweeneyda inaan aragno iyada oo quruxsan oo aan si aad ah u jecel nahay.
Ku jawaab natan
Haye, waxaan ahay Natan, waxaas oo kale ayaa igu soo noqnoqda mar kale. Waxaan la kulmay gabadhaan quruxda badan ee quruxda badan quruxdeeda iyo quruxdeeda muuqaalkeeda jirka awgeed, wey i xiisay aniga waana jeclaaday waana jeclahay tb laakiin waa la qabaa. sidaa awgeed waxaan go'aansaday inaan ka tagno isaga x dhibaatooyinka conjugal ku laabashada dhiniciisa x xaalad indesion sero waan sii wadeynaa. Midkee waxaas oo dhan ay iga codsatay waqti iyo markaan ku soo noqday inaan wada joogo waxyaabo way ka duwanaan doonaan, sidaas ayaan u malaynayaa waxaanan rajaynayaa inaan jeclahay oo aan jeclahay. natan iyo gabriela
Laakiin ka warran haddii haweeneyda la yiraahdo, marka laga reebo inay nin leedahay, ay leedahay gabadh 1-sano jir ah .. Ma jirtaa wax fursad ah? Haa, waan sharraxayaa xaaladdayda .. Waan ku dhowahay hubaa (50%) inay weli wax dareemayso aniga .. ama ugu yaraan wuxuu ka dareemay iskuulka ... xitaa nin indhoole ah ayaa ogaan lahaa. Haweeneydaas wax 5 sano ah kama ogin .. hadaan ka fikiro iyada waa macquul inay iyaduna aniga iga fikirto ... Waan ogahay waxa aan doonayo inaan sameeyo maahan wax caadi ah, laakiin waan jeclahay mana ihi kaliya waxaan ka hadlayaa jirkeeda .. baryahan waxaan ku arkay sawiro qaar waana cajiib, xusuusteedii oo dhan si deg deg ah ayey iigu yimaadeen .. waxaan leeyahay qorshe u gaar ah, hada masaafada ayaa na kala tagtay .. waxaan rabaa inaan waco, mana garanayo sida, laakiin waa inaan garwaaqsado haddii ay runti rabto inay taasi tagto .. waa wax aad u khiyaano badan, sidaa darteed waa inaan noqdaa mid taxaddar leh ... runtu waxay tahay inaan degi lahaa inaan ku arko iyada oo meel fog ama dhageysiga codkeeda .. Haddii uu jiro qof igula talin kara si aan u gaaro, weligay waan u mahadcelin lahaa.
Qayb ahaan way ku saxan yihiin waxa la daabacay, laakiin waa inaannaan jidkooda u bixin (sida ay dhulkayga ku dhahaan), ma jirto haween dhib badan, kaliya jaakad xun (xeelad), haddii aad qof jeceshahay, u soo dhowaada , la hadal iyada, laakiin tan ugu muhiimsan, dhageyso… waxay kuu sheegi doontaa waxay rabto iyo goorta ay rabto…. wax in
Qayb ahaan way ku saxan yihiin waxa la daabacay, laakiin waa inaannaan jidkooda u bixin (sida ay dhulkayga ku dhahaan), ma jirto haween dhib badan, kaliya jaakad xun (xeelad), haddii aad qof jeceshahay, u soo dhowaada , la hadal iyada, laakiin tan ugu muhiimsan, dhageyso… waxay kuu sheegi doontaa waxay rabto iyo goorta ay rabto…. Wax aniga ii shaqeeya waa inaan ula hadlo si aan dan ka lahayn… sidii inaanay i xiisayn interest. maxaa yeelay haddii ay jiraan wax dumarka soo jiita, waa danayn la'aan ... waxay had iyo jeer dareemaan qurux oo uma istaagi karaan in qofna uusan sidaas u tixgelinaynin ... waa hagaag ... waan jeclaaday faallooyinka ... Waxaan rajaynayaa in xilligan la joogo u adeegi doono iyaga si fiican ...
Waxaan ahaa dhowr sano xiriir xiriir aan la lahaa haweeney xaasle ah oo waliba aan qabo, jaceyl ayaa igu dhacay, hada mudo ayaan xumaanay, maxaan sameeyaa, ma aqaano sidaan markale ugu guuleysan lahaa iyo waxbadan ayaan isla garanay midba midka kale, xeerarka, waxaan u maleynayaa habka caadiga ah, maseerka iyo kuwa kale. MA RABO IN LAGA WAAYO LAAKIIN waxaan u maleynayaa inaan u baahanahay talo si aan dib ugu laabto, waxaan rajeynayaa talo qaar, mahadsanid hore
SIDII AAN U HADLAN AYAAN AHAY DHAKHTAR, dumar badan ayaa yimaada xafiiskeyga, badankoodna waa la guursaday ... waxaa dhacda in gabar 23 jir ah ay halkaan timaado, guursatay waqti hore ka hor iyo sidii aan ku bilaabanay kalsoonida, iyadu waxay ii sheegtay haddii ay ila kulmi karto ... waan ku oggolaaday codsigeedii iyo kuwo kale Waxay ii sheegtay waxyaabo uusan ninkeedu fiiro gaar ah u haynin ... waxay qirtay inay i jeceshahay maaddaama aysan jirin dad maalintaas oo dhan. Waqtiga ay imaaneysay, waxaan go aansaday inaan dhunkado ... jinniyadu aad ayey u kululaadeen, laakiin aniga oo ixtiraamaya goobtayda shaqada ayaan u sheegay inaanan doonayn inaan halkaas ku sameeyo… way xanaaqday oo way tagtay…. wuxuu qaatay 2 bilood isagoon arkin ilaa ay dhawaan timaado, laakiin kaligeed kaligeed ima imaanin ... qalbigeygu wuxuu ku sigtay inuu dhaco maxaa yeelay ninkeeda ayaa soo galay marka hore iyaduna waliba aad ayey u culustahay ... wax walbana waxaan ugu diyaar garoobay ... waxaa soo baxday in ninkeeda uu la tashan doono ... Waa qibrad aad u fool xun, marka hore maxaa yeelay waa inay wajigeyga jabtay, ka dib sababtoo ah anshax xumo aad uma lihi inaan dhaho iyo kadib maxaa yeelay way i dacweyn karaan. .. Waxaan dareemay doqonka ugu badan, midabada wejigeyga ayey kujiraan, si dhib yar ayaan uhadli karaa. Tan ugu murugsanina waxay tahay in ninkeedu aad u qabowyahay, waxaan dareemay sida dadka ugu liita ... Waxaan qiyaasayay waxa dhici doona haddii aan xaaskeyga meel u raaco oo ay ii soo baxdo inuu qof la joogo aniga oo aan ogeyn, Waxaan dareemayaa xumaanta…. Maalmo ka dib gabadhani way soo noqotay runtiina waa qurux. Wuxuu ii sheegay inuu u socdo arrintiisa, waxaan dareemay doqon nacasnimo ah, waxaan arkaa inay tani tahay mid aad khatar u ah ... waxa iga walwalsan ayaa ah caqli xumada haweeneydan, maxaa yeelay haddii ay awoodo inay ninkeeda ii keento oo ay u dhaqmaan sida ugu daran oo dhawr maalmood ka dib ku noqo si aad i waso .. XUN AYAA AH IN AAN SI AAD UGU JECLAHAY OO AYAY CODSATAY IN AAN NOQDO JACAYLAYGA… MA GARANAYN SIDII AAN UGU SAMEEYO OO AAN UGU SHEEGAY INAAN FIKIRAYO IT
hello the .. runta waa talaabada ugu horeysa adoon ogeyn waan ku dabakhayaa
Waa inaad sii wadataa quudinta waxa kaa dhigaya inaad dareento dhereg, taas oo aan kula hadlayo oo aan ka farxiyo runta waxay dhibaato ku qabaan lammaanahaaga hadda laakiin waxaan si aamin ah u aaminsanahay inaan sariirta ku dhamaan doono ... .. anigoo siinaya buuxnaanta ahaanshaha qof dumar ah, maxaa yeelay runta Marwada sifiican ayey ufiican tahay, marka laga reebo inay iyadu caqli badan tahay, waxay leedahay jir weyn oo dumarka da'da yar qaarkood ay horeyba u jeclaan lahaayeen waxaanan bilaabay inaan ka fikiro inay doqon tahay lamaanaheeda oo aysan doonayn inay ka qayb gasho iyada, shucuur ahaan iyo galmo ahaanba, maxaa yeelay runtu waxay tahay waxaan arkaa iyada oo rabto inay ila faraxdo, laakiin sikastaba. still Weli waxaan la dhibtoonayaa inaan la yeesho kulan galmo oo fiican.
Faallada aad daabacdo waa mid aad u wanaagsan, runtii way i caawisay, mahadsanid
Runtu waxay tahay waxaan ku jiraa xaalad aad u la mid ah, waxaa jira waxyaabo aad u run ah, waxaan jeclahay haweeneyda shaqadayda waana ogahay inay iyaduna iyadu jeceshahay, sida iska cad waxay guursatay nin waxayna leeyihiin laba caruur ah, waa 7 jir sanado iga weyn aniga laakiin aniga Aad ayey ii soo jiidanaysaa ... Waxaan si tartiib tartiib ah u xaqiiqsaday inay kujirto marxaladda kalgacal ee lammaanaheeda isla markaana mar aan lahadlayo waxaan ogaaday inaanay doonayn inay aqbasho, waqtigaas iyada ah waxay ahayd markii aan u dhawaaday ... Ma aqaano haddii waxa aan sameeyay khalad ama wanaag, xaqiiqda ay tahay inaan gacmaheeda qabtay oo aan dhunkaday, afkayga ayaan dhagteeda keenay oo aan u sheegay inaan ka jeclahay maalintii iigu horeysay ee aan arko ... way aamustay tan iyo maalintaasna waxay ila ahayd wax u dhigma sida aan u maleeyay inay noqonayso ... waa hagaag su'aashu waxay tahay tani wax badan ayay ii adeegtay wax badanna waan bartay , Waxaan rajeynayaa inaan ka guuleysan karo ... Waxaan cadeeyay inaanan u sameynin inaan burburiyo gurigii ay dhistay, waxbadanna ay ka yartahay in gurigeeda la geeyo sariirta, waan jeclahay naagtaas waxaana rabaa inaan la joogo inta badanwaqti macquul ah ...
Hagaag, ma aqaano inuu maqaalku fiicanyahay, laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay inaan tixgalino oraahda ah "usha aad ku cabireyso ayaa lagugu cabirayaa" sidaa darteed god caajis ah ... ayaa sifiican u buuxiya midka aad guriga ku haysato oo aad ka tagto bannaanka ... dhamaadka ragga oo dhami waxay kaliya rabaan cunka ... kan kale ... maxaa yeelay daryeela iyada ama waalan ... iyo haddii aad sameyso markaa waa maxay nacas ... ... ha ... iyo doqon badan naagta abuurtaa ... ha
Gacaliye LUIS, waa la ogaan karaa inaadan noolaan, ragga iyo dumarkuba waxay ku khaldamaan fekerka ah inaad haysatid lammaanahaaga nabadgelyo, waxaan noqonay kuwo la saadaalin karo, kaligood ah, feejignaanta, chivalry iyo jacaylka, dhanka kale dumarku way baxaan hadday isu diyaariyaan, waxay noqdaan waxoogaa taxaddar la'aan ah qofkooda ... tan qof u dhashay ugaadhsade u dhashay sida "I" waa dhimasho ... tanna sariirta ayey ku timaaddaa, ma ogid waxa ay tahay in had iyo jeer la cuno isku "rooti isku mid ah" Haweenka qaar waxay mudan yihiin in la seexiyo maxaa yeelay ma yaqaanaan sida wax kale loo sameeyo, waxaan dhahayaa iyagoon rabin inay u muuqdaan macho, nasiib daro waxaad maqleysaa iyagoo hadlaya waxaana wanaagsan in laga aamuso, sida rag badan aynaan waxba u hayn maskaxda, tusaale ahaan adiga ... markaad caajiso midigta iyo xumaanta waxba kama qabanaysid laakiin eedaynta la'aantaada, ma ogi haddii waxbarashadu tahay, laakiin haddii khibrad la'aantaadu tahay, Kolkaad indhahaaga saarto haweeney kale oo aan ahayn ADIGA, maxaa yeelay ninku sida xayawaanka kale ee labka ah waxaa loogu talagalay inuu abuurka ku beero dhul kale, taas oo laga wado dumarka kale. Markaad tan ka hadlayso, waxaan ula jeedaa dareenku inuu ku fidiyo farcankaaga sida ugu macquulsan, si uu u ilaaliyo noocyada ama hiddo-wadahaaga, laakiin halkan ayaa ah kala duwanaanshaha maxaa yeelay in badan oo naga mid ah ma haysano wax aan ka badnayn 2 neerfayaal, oo aadamnimaduna way dhalatay waana taas sababta in aan ka soocno xayawaanada kale waxaan kugula talinayaa inaad aqriso MARX, wuu sharaxayaa waxaas oo dhan, tusaale ahaan waxaad u maleyneysaa inaad farxad ku iibsaneyso faraantiyo, waraaqo saxiix ah, laakiin waxaad sameyso waa inaad iibsataa haweeney leh xuquuq iyo waajibaad, taasi waa addoonnimadeedu way sii jirtaa, markay haweeneydu ku dhiirrato inay aamin la’aan noqoto, waxay garwaaqsataa awoodda ay u leedahay inay go’aansato oo ay wax ku qabato taasina waa mid naga dhigaysa mid gariir leh, sidaa darteed gaalnimadu aad ayey uga sii adag tahay raadinta qof aad la seexato Haddii aydaan ogayn, haweenku waa ka aamin daran yihiin ragga, laakiin way ka caqli badan yihiin oo ha ku wareegin faankeena oo kale, anaga oo ah ragga wanaagsan waxaan ka hadalnaa guulaheena, laakiin iyagu way na barayaan, waxayna yaqaanaan sida loo xafido sirtooda. XUSHMADDA DUMARKA MARKASTA SI QARSOON U AH, EE KU DHIIRIGELIYA Baahida aan u qabo inaan ogaado iyaga… EMMANUEL
Hagaag, waan ka helay maqaalka runtuna waa, Anigana tayda ayaan haystaa! Waxaan is qabay 5 sano iyo seedigey waa isku mid laakiin aamusnaan waan jeclahay ilaa qorraxda maanta, had iyo jeer waxaa jiray muuqaalo aad u daran oo aan ereyo lahayn ka dib waxaan go aansaday inaan la hadlo, waxba ma uusan oran ! Ka fikir, wuuuao! Marka waa run waxa ay dhahaan jaceylku waa indhoole maxaa yeelay waxaan ku dhaartay inuu aniga wax uun dareemay. Indha indheyntiisa, dhunkashadiisa dhabanka oo aad u daran, msmkiisa ... Wax walba waxay muujiyeen inaan sidoo kale ka helay isaga, wixii aan ku idhi, wax dambe iima soo qoro oo wuxuu isku dayaa inuu iiga leexdo! Aniguba waan sameeyay maxaa yeelay waan fahansanahay inaan ka dhigo mid aan raaxo lahayn, laakiin shalay waan arkay, si dhunkasho ah ayaan isugu salaamay oo kaliya waxaan ubaahanahay inaan bushimaha taabano! Waxaan isku dayaa inaan dan ka lahayn aniga laakiin ma aqaano, waxay ila muuqatay inuu iska dhigayo, waxaan u maleynayaa waxa uu haysto inay tahay inuusan dooneyn inuu ku guuldareysto walaalkiis, inuu burburiyo wixii uu soo dhisay iyo raaxadiisa! Waan fahamsanahay maxaa yeelay isla waxbaa igu dhaca, laakiin waa wax laga naxo in sidaas la noqdo.Waxay ii sheegeen in taxaddar la'aanta marka la sifeeyo ay tahay jacayl jiro ama ay naga cabsanayaan .. Laakiin haye, taasi waa nolosha. Waa inaan wax walba u diyaar garow maxaa yeelay sida ay ii sheegeen q mar alla markii wax walba la ogaado, waxay u badan tahay in wax ka dhex dhacaan labadoodaba runtiina way iga nixisaa, xitaa haddii ay tahay waxa aan ugu jeclahay. , cabsida ogaanshaha in aan dareemeyno wax kale inta aan qiyaasi karno!
Aad ayey ufiican tahay hada in dariskeyga uu daryeelo naftiisa maxaa yeelay wuxuu leeyahay xaas aan marwalba jeclaa galmo
Waan jeclahay maqaalka waxaanan jeclaan lahaa inaan la wadaago waayo-aragnimadayda, laga yaabee goor dhow inaan jeclaado!
Sidii aan maalin dhaweyd u soo jeediyey, waxaan go’aansaday inaan u sheego waaya-aragnimadayda; Waxaan rajeynayaa inay tahay madadaalo iyo waxtar. Ujeeddadaydu way ka fog tahay inaan ku dhiirrigeliyo qofna inuu ku daydo dhaqankeyga; Haddii ay noqon karto mid miyir leh, markaa waan gaarayaa hadafkeyga.
Xaalku wuxuu dib ugu noqonayaa afar sano: Waxaan ahay marwo qaan gaar ah, oo si farxad leh u guursaday; Waxaan tixgeliyaa naftayda waxayna ii tixgeliyaan mid aad u qurux badan, soo jiidasho leh oo leh shakhsiyad aad u qeexan; Anigu waxaan ahay macho (ma caawin karo), waxaan jeclahay geesinimo iyo rag aad u macho badan. Sidaan qiyaasayo, sida kuwa badan, yaraanteydii waxaan lahaa jaceyl aad uqurux badan; Duruufo aan quseyn dartiis ayuu mid kale iiga tagay, kaas oo aanan weligay arag ama aqoon. Wuxuu noloshiisa ka fogeeyay deegaankeyga. Waqti adag baan qaatay laakiin waan ka gudbay. Xiriirro dhowr ah ka dib, waxaan ninkayga kula kulmay shaqadeyda oo ah shaqaale dowladeed ka dib xiriir gaaban laakiin adag ayaan is guursannay.
Waxaan si farxad leh ku guursaday sanado badan nolol dagan oo aan dhib lahayn.
Afar sano ka hor iyo xaalad ay duruufuhu qasbeen, waxaan la kulmay, 30 sano ka dib !, Yuu ahaa kii aan jeclaa ee ugu horreeyay.
Waxay ahayd markii uu aabihiis ka soo kacay ee aan ku qancay. Waan ka ogaa noloshiisa dhinacyada saddexaad iyo inuu isagu xiiseynayo tayda.
Kulankii aan wada yeelanay wuxuu ahaa xaalad aan caadi aheyn maxaa dhacay. Ninkeygu uma arkin wax aan habooneyn in aan u kacno hurdada, in kasta oo aan muujiyay xoogaa diidmo ah oo ku saabsan cadaawada aan qarsooneyn ee aan u qabo ninkeygii hore.
Waxaan si kayar ama kayar si sax ah u qeexaa la kulanka aan markii hore ku sifeeyay mid dhabanno, ku dhowaad edeb daran, iyo anshax xumo.
Markii uu nagu salaamayey meel xoogaa ka gooni ah qoyska intiisa kale iyo asxaabtiisa, wuxuu igu yidhi:
«Patri, ugu horreyntii waxaan kuugu mahadnaqayaa inaad ii timid aabbahay, waan ogahay inaad ku qanacday iyo tan labaad iyo in kasta oo ay duruufuhu ahayn kuwa saxda ah, haddana waxaan kuu sheegayaa inaanan awoodin inaan ku iloobo gebi ahaanba sanadahan; Waan ogahay inaad i canaanan karto oo aad waxyaabo badan wejigayga ku qaban karto, laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay inaan noqo mid qumman, waad ogtahay inaan marwalba ku ixtiraamayay xiriirkeenana aan waligiis la dhameystirin, hamigeyga ugu weyni waa inaad iga dhigtaa taada oo aan sameeyaa adaa iska leh Wax shaqo ah kuma laha ninkaaga ama xaaskeyga, waa wax aniga iyo adiga naga dhexeeya, dib ugu soo celinta xiriirkii sida aad dooneysay. Hadda waan ku ruxruxaayaa waxaanan kuu dhaafayaa warqad nambarkayga gacanta ah. Haddii ay kula muuqato inay ku habboon tahay, i soo wac, waan rajeynayaa sidaas oo waad ogtahay inaan ku siin doono dhammaan jacaylkayga, danqashadayda iyo qiiradayda. »
Waxaan ahay qof dumar ah oo garaneysa sida loola dhaqmo dhammaan xaaladaha oo aan aad isu hubo naftayda, laakiin ma qiyaasi kartid sidaan ku joogay, "cabsi ayaa igu jirta wax yar." Maskaxdayda waxa ka dhashay xanaaq, nacayb iyo yaab ayaa igu soo batay, ma awoodin ama maan siinin fursad aan erey ku caddeeyo, warqaddii waraaqda ahayd ee uu ku jiray ayuu gacantayda ku reebay markii uu macsalaamaynayey isaga oo aan sii amba-qaadinna wuu iska tegey.
(in la sii wado)…
cutubka oo dhan
Ku jawaab lios
Inaad la joogto haweeney xaas leh waa qurux laakiin jacaylka oo dhaca wuxuu noqon karaa mid labadiinuba u dhinta waa inaad si cad ugu cadeysaan hadafkiina waxa aad labadiinaba dooneysaan adigoon dadka kale wax yeelin iyo ikhtiyaar fara badan inta xiriirku socdo maxaa yeelay xiriirka noocaan ah waligaa saaxiibadu nacas maleh Naag la qabo oo siineysa wax aysan siin karin, la cadee iyaga waxayna arki doonaan inuu jiro farxad farxad leh oo aan cidna la dhaawaceynin, aan cadeeyno, naag xaas leh waxaan u dooneynaa sariirteeda oo ka farxiso adoo siinaya waxa ka maqan, jacayl qaar la siiyo. Way lumisay, laakiin yeynaan isku khaldin dareenkeeda iyo tan ka sii daran yaanan u jeclaanin iyada xusuusnow inay guursatay waxay leedahay nin iyo carruur laga yaabee inay wuu ku xanuunsan lahaa waxaad ku raaxeysaneyso, waa uun xiriir qurux badan
Hagaag, wali shaki ayaa i haya, tan iyo markii aan dhiganayay Dugsiga Sare waxaan xaqiiqsaday in eedaday soddohda ah ay dhibaato ka haysato adeerkay, maxaa yeelay wuxuu ahaa nin sakhraansan oo daroogo caba, maxaa yeelay waxaan u maleynayaa in dumarka iyo sidoo kale ragga ay na khiyaaneeyeen raaxo la'aan, xaaladaha caadiga ah iyo xitaa dhibaatooyinka iyo dacwadaha guriga. Markaa maalin maalmaha ka mid ah ayaan arkay iyada oo ku sigatay inay ooyso aniguna, anigoon ku talo gelin inaan nolosheeda galo, waxaan u dhawaaday inaan isu bixiyo saaxiib, waxaan ka wada hadalnay tan iyo tan (waxyaabaha caadiga ah iyo kuwa caadiga ah), illaa ay ka bilawday inay faahfaahin ka bixiso qaabka ninkeeda mar hore Ma uusan jeclaan iyada, in badan ayuu ka maseyray oo siyaabo badan ayuu ugu xadgudbay, isagoo ku sigtay inuu wax ku dhufto; Maalin maalmaha ka mid ah waxay ku tiirsatay dhabta, anna waan salaaxay timaheeda iyadoo aan xumaan lahayn, waxay gacanta saartay laabtayda iyadoo la ooyaya, waxay hoos ugu dhigtay joogga suunka, taas ayaa iga dhigtay inaan ka baxo mawjadda tan iyo sidii nin caafimaad qabo guskaygu si dhakhso leh ayey u kortay laakiin booska uu gushaydu taagnayd awgeed, maan ku raaxaysanayn maxaa yeelay buruqdu aad bay u muuqatay, taas oo ay igu tidhi: maxaa dhaca? Maxay sidaa ku heshay Waxaan u maleeyay inay wax iga doonayso aniga oo ah eeddo ama maxaad iska dhigaysaa?; laakiin sidaas may ahayn, wuxuu ii sheegay oo keliya inaan soo noqdo maalinta ku xigta si aan si deggan ugu hadlo. Si aan u soo gaabiyo sheeko dheer, waxaan kuu sheegayaa inuu igu casuumay inaan imaado gurigiisa waxaanna ku arki karay caruurtiisa (3) sariirahooda oo ku jira hal qol iyo markuu i geeyo gurigiisa, (wadada wuxuu ii sheegay inuu doonayo inuu qaato oo hadduu raalli ka yahay) Waxaan u maleeyay in ninkeedu aanu meesha oollin; Laakiin markii aan imid ayaan arkay !!, waxaan ku jiray sariirta King Size oo wada hurda, waxay ii sheegtey inuu yimid isagoo sakhraansan oo cadaab ah iyo inuusan soo kicin ilaa maalinta kale ee galabta, waqtigaas ma aanan kicin waan ogahay waxa la sameeyo waxaanan u malaynayaa inuu arkay wejigayga shaki laakiin aniga oo aan gacantayda sii deyn wuxuu fadhiistay sariirta cidhifkeeda, xoogaa ayuu i jiiday oo wuxuu igu qaatay suunka, wuxuu hoos u dhigay xiritaanka surwaalkeyga, wuxuu la soo baxay digaagteyda xawaare aan waqti i siin si aan wax uun uga cadeeyo madaxayga wuxuuna igu bilaabay boodh qurux badan !!, waxaan u maleynayaa inuu u sameynayay aargoosi laakiin waqtigaas ma aanan miiqin wax fikir ah oo aan ka aheyn inaan ku dhufto Bitch-kaas sidii aan doonayey iyo marar badan oo aan kari karay, waxaan ku dhammeynay inaan ku qabanno dhammaan jagooyinkii suurtagalka ahaa ee uu i baray (waxaan dhihi karaa inay iyadu macallinkaygii ahayd xagga galmada) oo sidaas oo kale ayaan u caayayaa! iyadoo ninku ag joogo. Waxaan ku dhaartay waa run. Shaki kuma jiro in haweenku yihiin kuwa ugu doqonnimada badan uguna kulul adduunka, kaliya waxaa jira kuwa niyad jabsan, ka laabtay oo la cadaadiyay iyo kuwa si xor ah u siiya xorriyaddooda (dhammaan heerarka) galmada, bulshada, shucuurta, iwm. . marka la soo koobo iyaga laftooda.
Waxaan ku qaatay ilaa 7 sano inaan noqdo gacaliyaheeda waana la guursaday maxaa yeelay khibrada ay ka heshay ninkeeda way ila raaxeysay, sidoo kale waxaan la kulanay howlaha galmada ee filimada xun xun ee ay xirneyd.
sifiican waqtigan la joogo waa dhamaantood, waxaan rajeynayaa inaad nasiib kuhesho guulahaagii "guur wanaagsan"
Hagaag dhalinyarada, waan ku qanacsanahay khibradiina, wax badan ayey iga caawin doontaa.
Hadana haddii aad ii ogolaato, aniga oo la jooga qof aan naagtayda ahayn, wax walba way dhici karaan, laakiin waxa aan ugu yar doonayo waa inaan jeclaado gabadhaas, ha noqoto mid ugaarsi ah ama mid aan la qabin,
Hagaag halkaas ayaad isiin doontaa ra'yigaaga, taas oo habka aad u fiican tahay oo sax ah,
Ku jawaab antulio
jooniska samantha dijo
Waad salaaman tihiin. Waxaan ahay haweeney xaasle ah oo gacaliso ila 10 sano igayar, markii aan la kulmay waxaa iisoo jiitay shakhsiyaddiisa macaan iyo xishoodka. taas oo markii waqtigu sii socday noqday qof si aad ah u dhiirran oo aniga uun iga sii horreeya taas oo aan markii hore la yaabay oo aan ku qancay markii dambe (Waxaan ahay 49 iyo 40), waxaan had iyo jeer ku noolaa nolol u heellan shaqada, guriga, carruurta, carruurta sayga, iwm markaa markay tani dhacday waxaan lahaa habeeno badan oo soo jeed iyo damiir leh maxaa yeelay dhankeyga ma ahayn mid horay loo sii qorsheeyay. Hagaag, isagu waa nin aad u heelan, ixtiraam badan oo aad iyo aadna ugu heellan su'aalaha
ruuxi ahaaneed (qayb ka mid ah waxay ahayd tawbadkeenka oo dhan iyo wixii la mid ah) laakiin waan sameynay mana garanayo booska aan noqonayo: a) Xaasle, is-hurnimo iyo wixii ka sarreeya aamin iyo gebi ahaanba aan faraxsanayn
b) ama la joogitaankiisa (taas oo aan hubo inaan ka dhigi doono kuwa i jecel aniga kuwa faraxsan). .. maxaa kale oo aan kuu sheegaa… ..
Jawaab samantha Jones
ps …………… Waan isku dayay oo taatikadaasi waa mid xasaasi ah hadii ay shaqeyso
hada waxaan leenahay xiriir wanaagsan si qarsoodi ah maxaa yeelay nasiib daro way guursatay….
laakiin waxaan ahay saaxiibkiisa ugu dhow ee dhow iyo xuquuq badan
Ku jawaab juan moreno
Qoraalkii hore ee aan diray ma galin.
Ha sameyn waxa aadan jeclaan laheyn inay kugu sameeyaan, waxay u maleynayaan in haweenka la qabo ay u fududaan tahay cilladahooda ka badan inta ay u maleynayaan inay qabaan, laakiin goor dhow ama goor dambe ayaa wax walba la bixiyaa ama la soo celiyaa waxaana jira oo kaliya xusuusta qandho ... ... dumar aad u tiro badan iyo in yar oo rag ah oo ka adkaada halkii ay ka fikiri lahaayeen dumarka la qabo, raadsada naagaha keligood ah oo xanaaq badan oo ha ku dhejin madaxooda wax aan micno lahayn ... uma qalanto kan go'aansaday inuu Guurku waa wax laakiin xusuusnow sidaad u raadiso guur in yar ka dib adiga ayey kuu shaqeysaa adigana ma doonayaan to
Waxaan isku dayay inaan sii wado faallooyinka wixii igu dhacay, laakiin ma galaan.
Ma aqaano in khibradeyda ay tahay tan ugu xun. Waxaan jeclaaday nin ku jira 60 jir ninkeyguna waa iga weyn yahay 20 sano. Arintu waxay tahay, waxay ku qaadatay ninka 60 jirka ah 2 sano inuu jeclaado waana aaminay. Laakiin ninkaygu markuu ogaaday, wax walba wuu igu eedeeyey. Laba bilood ayaa ka soo wareegtay wuxuuna ii sheegay in ninkaygu been sheegayo, markaa waxaan qaaday hawshii ahayd inaan iska soo ogaado. Fursadii labaad isagana wuu igu eedeeyey, waa maxay fulaynimadu! Runtu waxay tahay in qalbigaygu sidii dhagax u rogay sidee mar kale qof loogu aaminaa. Runtu waxay tahay waxbaa ku burburay guurkeyga, ha ahaato kalsooni ama jacayl. Laakiin tan ugu daran ayaa ah inaan wali ka fikiro ninkaas anigoon u qalmin. Ninkaygu wuxuu rabaa inaan ka bilowno meel hoose. Alxamdulilaah, si ka duwan maqaalka ma ahi naag fudud oo sariirta lala seexan karo nin, xitaa haddii aan isaga u dhinto.
Jawaab KU SOO DARAN
Magac 2 dijo
Waxaan u maleynayaa in mowduuca aan ka hadlayno uusan ku saabsaneyn anshaxa ama haddii waxa aan sameyno ay sax yihiin ama khaldan yihiin, waxay ku saabsan tahay waaya-aragnimada arrimaha sasabashada, muddada.
Jawaab Anonymous 2
Iyadoo la raacayo waxa Jaime tilmaamay 1-dii Maarso, waxaa aad muhiim u ah in wax laga caddeeyo bilowga. Badanaa qofna ma doonayo inuu burburiyo guur dhisan. Ka baxsan tan, qof kasta oo raba oo qatar u geli kara, dhinaca kale aad u weyn, in sheekada la ogaado, wuu ogyahay inay sidoo kale tani tahay halka shucuurtu ku jirto.
Aniga oo ku sii wadaya waaya-aragnimadii aan bilaabay in aan sheego wakhti yar ka hor, wixii aan soo maray muddadaa afartan sano ah ayaa si cad u muuqda oo muhiim ah.
U gudub barta!!
Kadib kulankeenii cajiibka ahaa ee soo kicinta, waxaan qaatay dhowr maalmood oo aan ka fekerayay waxaana dareemkeygii ugu horeeyay ee ciil iyo nacayb loo beddelay xiise iyo rabitaan. Waxaan dareemay inuu doonayo inuu si weyn u quudiyay "ego" iyo rabitaanka kulanka. Looma baahna in la sheego, wuxuu ku hayey warqada warqadiisa taleefoonkiisa. Qiyaastii 15 maalmood ka dib waxaan go aansaday inaan ku waco taleefan oo aan soo jeediyo kulan aan isku weydaarsado dareenka. Markii aan ka jawaabayay wicitaankeyga waxaan ku arkay isaga oo walwalsan laakiin ku faraxsan kulanka. Aniga oo aan ku sii dheeraanin ayaan u sheegay markii uu magaaladayda imanayo.
Si kadis ah magaaladan walaalkay wuxuu leeyahay guri xagaaga ah oo ninkaygu ku ilaaliyo isaga. Waxaan soo jeediyay suurta galnimada in aan halkaas ku kulmo, fikrad u muuqatay mid isaga aad ugufiican maadama ay tahay dhisme weyn laakiin ficil ahaan aan cidina is aqoon.
Nacho wuxuu ii sheegay inuu booqasho ugu tagayo hooyadiis 7 maalmood markuu yimaadona uu ii soo sheegi doono.
Toddobaadkaas sugitaanku wuxuu ii ahaa aniga xasilooni darro ku qasan rabitaanka kulanka.
kadib 7 maalmood kadib wicitaanku wuu i soo gaaraa (subaxdii), waxaan tilmaamayaa in ninkaygu shaqeeyo subaxdii aniga iyo galabtiina.
Waxaan qabanqaabinnay inaan kulanno maalinta xigta 10-ka subaxnimo, waxaan ku sugi lahaa sagxadda dhulka oo wuu garaaci doonaa gambaleelka.
Looma baahna in la sheego, markii jalaska la garaacay wadnahayga ayaa ka booday garaac.
Waan furay. Gurigu waa cusub yahay waana mid aad xikmad u leh marka loo eego goobta. Waxaan isku salaamaynaa laba dhunkasho dhabannada. Mar haddii aan fadhinay qolka fadhiga, waxaan u sheegay in aan aad ula yaabay soo jeedintiisa laakiin aan ku qancay daacadnimadiisa iyo rabitaankiisa isla markaana aan doonayo oo aan doonayo in aan isku dayo, laakiin waxaan ku xiray shuruud ah in uusan jirin jacayl ama wax la mid ah taasi iyo in kulamadu noqon doonaan oo keli ah markaan Labadayada dooneynay iyo xaaladaha aan labadeenaba dooneynay. Waxaan u sheegay inaan xiiseynayo inaan iska yeesho maadaama aysan dhab ahaan waqtigaas dhicin. Waxay ula muuqatay wax ku qumman isaga oo aan sii kala qaadin oo si dabiici ah isla markaana isla markaasna wuxuu si tartiib ah u qabtay gacantayda oo uu saaray duqsigiisa; neeftii baa i qabatay. tartiib-tartiib ayuu bilaabay inuu hago iyada oo salaaxaysa iyada oo aan wali ahayn xirmo aad u adag. Waan kaxaystay maadaama aysan si kale noqon karin. Waa inaan sheegaa inaysan jirin naag, mid guursaday ama mid aan qabin, ama naag carmal ah oo iska caabin karta salaaxida xubinta iyadoo loo marayo surwaal. Mararka qaar mugga iyo turgorku way sii kordhayeen. Daqiiqad cayiman, wuxuu soo saarey foolligii awalba taagnaa oo xoog badnaa aniga iyo, horeyba gebi ahaanba waan la yaabay, waxaan bilaabay inaan salaaxo oo aan ku xoqdo markii ugu horeysay dabacsanaan weyn iyo daryeel.
(in la sii wado)
IBS BUTTON WAY II SHAQAYSAA
Aan la aqoon 2 dijo
Wanaagsan Patri, waxa aan u baahanahay waa fikrado isla markaana haweeney ayaa sidoo kale wax ku biirin karta.
Waxyar kadib waxaan u soo jeediyay inay igu sugto qolka jiifka, inaan musqusha aadayo. Markii aan iskudhafayna waxaan kahelay asaga oo sariirta geeskeeda fadhiya feerihiisana saaran! Waxaan jiifsaday inta u dhaxeysa go'yaasha waxaanan u soo jeediyay inuu isna sidaas oo kale sameeyo. Anigoon sii ambaqaadin, wuxuu bilaabay inuu si tartiib ah u salaaxo caloosha iyo naasaha. Aniga oo aan ku sii dheeraanin ama aan faallo ka bixin ayaan iska siibay rajabeetay oo waxaan ku ekaaday saraawiil. Waa inaan sheegaa inaan leeyahay naaso waaweyn oo qurux badan. Waxaan u sheegay inuu si tartiib ah ii salaaxo maadaama aan iyaga aad xasaasi ugu ahay.
Waxaan u ogolaaday naftayda in la sameeyo iyada oo aan la soo celin. Wuxuu dareemay burushka xubnihiisa awooda leh dhexdiisa nigiskiisa. Waqtigaan aad u kacsanaa waxaanan arkayay xubintayda taranka oo qoyay. Wuu iga dhunkaday qoorta iyo bushimaha. Maaddaama aan isku wajahnay mowqif dhinaca dambe ah, booska ayaa noo roonaaday. Farxaddiisu way weynayd. Ugu dambayntii way iska siibtay nigiskeedii waxaanan iska siibay saraawiishayda, anigoo si tartiib ah ugu nasanaaya ilkaha irridda siilkeyga qoyan. Markii ugu horreysay wuxuu soo saaray indha-indheynta faraqa ku dhegan iyo taabashada kintirka. Waxaan si cad u xasuustay cabirka iyo qaabka uu ciyey xoog badan, in kastoo inkasta oo aanaan waligeen jacayl sameyn, hadana dhowr jeer ayuu siigaystay waanan garanayay isaga cm. ilaa cm.
Si tartiib-tartiib ah, soo-gelitaanku wuu qoto-dheeraaday; Waxaan ogaaday markii iigu horaysay sida xubin awood leh oo xoog badani iigu soo duushay si tartiib tartiib ah isla mar ahaantaana si go'aan leh. Si la yaab leh, markii aan dareemay dhammaan foolashii wax ku dhufaneysay oo igu dhex aasan, waxaan dareemay dareen ah in dib layga dhigay markii labaad.
Qarsoodi 2 dijo
Way fiicantahay in la akhriyo lana wadaago khibradaha gaar ahaan markay si fiican u qoran yihiin. Wanaagsan Patri.
Waad salaaman tihiin, waxaan aad u jeclahay haweeney xaas leh oo caruur leh isla markaana isku da 'nahay
way ila jirtaa maxaa yeelay waxay dareemeysaa mid aad iigu wanaagsan aniga, waxaan u iri maxaa yeelay way ii sheegtay
Waxaa dhacda in xiriirka ay ninkeeda la leedahay ay tahay wax mahadnaq ah, aragtidayda
Waxay ii sheegtaa inaysan ka tegi karin maxaa yeelay wuxuu u sameeyay waxyaabo badan oo wanaagsan oo uu ka caawiyay waxyaabo badan, laakiin markii uu badalay qaabkiisi ahaaneed, ma jecla isaga mar dambe, iyo in dhibaatada ugu weyni ay tahay iyada oo aan waligeed orgasm isaga, iyo aniga ila haa, inaan ka dhigo inay dareento haweeney, oo iyadu haddii ay rabto inay ila joogto, talo fiican ayaa aniga ii ah favi
MAQAALKA SUPER, BARNAAMIJKA IYO CILMI-BADNIMADA KU HADLAYA, WAA Wacyigelin qiiro leh oo ku wajahan QOFKA KELIYA IN AAD U FADLAN YAHAY MEESHA AY KU SIIYAAN TALO XUN ,,,,,,, SOO BANDHIG, akhriste subax wanaagsan
Jawaab aj carles
Waqti kahor waxaan jeclaaday naag xaas leh marki horaba sifiican ayey ila soo hadashay laakiin faahfaahin kadib waan joojiyay sameynta waan aaminsanahay iyada jaceylkeedana waxaan u aadayaa iyada oo ka tagaysa wax walbo wixii aan soo maray waan ogahay taas waa jacayl maxaa yeelay horaanba waxay qaadatay waqti dheer mana aqbalin wax jaceyl ah maxaa yeelay waqtiga aan ka fikirayo iyada oo dhan, waxay leedahay magaca ugu quruxda badan ee jira: Cecilia.
Ku jawaab Leinad
Waad salaaman tihiin, waxaan jeclaaday dumaashiday oo ah xaaskeyga walaasheed, waa 20 sano jir waxayna leedahay gabadh 1 sano jir ah aniguna waxaan ahay 33 jir, mar hore ayaan qaaday talaabadii ugu horeysay, waxaan ku ciyaaraa kaftan iyada iyo xitaa way dhunkataa gacmaheeda laakiin waxay u qaadataa kaftan Iyo wax kale, maxaan kale oo aan ku samayn karaa si aan ugu dambaynti sariirta u geeyo? Ninkeedu wax badan buu shaqeeyaa laakiin waxaan arkaa inuu u fiirsanayo iyada oo aan aad ugu jirin Nicmada laakiin waa run oo dhib ayaan ku qoslaa laakiin waan ka qosliyaa
WAXA AY UJARAYAAN IN AY SOO JARJIRAAN DHULKA NIIKADA NOOCA IYADANA DUMAR AH, CEEB MA SIIYAAN, WAXYAABAHA AY KU DHAMAANAYAAN OO AY DHIMAN YIHIIN, DAMBIILAYAAL. IN XAALAD LAGU GARANAYO SIDII AY U QIIMAYN LAHAYEEN LAHAYN, HADDII RUNTA LAGA FAHAN YAHAY SHAQAALAHA UGU SHAQAYNAYA, MA AYA KU SOCONAYAAN KA FIKIRKA RAJADA WAXA AAN LAGU QABAN. KOOXAHA ISTICMAALKA IYO ISBADHAYAASHA, ISKU JECEL ISKA ISKAA OO AAN DHIBAATO U GELI DOONIN kuwa aan u qalmin, laakiin iyagu waxay u maleynayaan naftooda caqli aad u yar, HADA AY ISKU AAMINSAN YAHAY IS AQOON BADAN, IMBILAAH!
Cunug dagan i aamin i love is the strangest thing there is
xitaa ma ogaan kartid
Yaad jecelaan doontaa xitaa haddii aad wax walba isku daydo
Ma ka saari kartid maskaxdaada taasi waa waxa aan kuu sheegayo sababtoo ah
Qiyaastii 4 sano kahor waxaan la kulmay iyada oo aan u ixtiraamayo lammaanahayga
Marnaba lama hadlin iyada maantana waxaan rabaa wax ka badan noloshayda.
Waxaan rajeyneynaa inay kaa caawin doonto inaad macsalaameyso.
Waa maxay boosteejo, maxaad u dhigi weyday sida loo noqdo khayaamo, beenaale, daallan, isla weyn, isla weyn, iyo beenaale loo dhan yahay? Qoraalkani wuxuu si fiican u muujinayaa gaalka, iyo midka ku dhaca shabakadooda, madhan, fidsan, aan qaan gaarin, dadka xaddidan, iyo aad iyo aad, aad u munaafaqnimo iyo nacasnimo. Maxaa jira si loo akhriyo…
Ramon, sawir la qaado galkaaga oo aad u adag, gadaal ku qor in aad afar u nuujinayso sida qaniinyada oo kale oo aad caashaqi doontid, ku dheji sawirka baqshad una soo bandhig qof ahaan, oo ay weheliso carnation cas iyo erayga "waan ku jeclahay" oo aad ugu jilicsan dhagteeda, kana codsanaya inay qaxwo ama qado qaadato; Isla markaaba waad ku baxaysaa adigoo dhoola cadeynaya oo markaad shaqada ka tagto adigaa iska leh, waxaan kuu xaqiijinayaa inaad u raaxeyso macaankeeda maalinta ballanta, laakiin markaa waa inaad u adkaysataa inta u dhexeysa boodhka iyo boodhka sheekada kugu dhaceysa. oo ku saabsan nolosheeda aan faraxsaneyn ee deriska ku ah ninkeeda, halkaas waa inaad noqotaa mid feejignaan leh, oo had iyo jeer siiya iyada sababta iyo ku biirinta fikradaha xunxun ee ka dhanka ah ninkeeda mar hore la qabay, marwalba fikirkaaga dhiib, marna taladaada; intaad dhageysaneysid waa inaad isku daydaa inaad mar kale diiriso, dhagteeda iyo aamusnaan, intaad dhunkato maqaarkeeda sida cunugga, waxaad ugu codsanaysaa inaad ku qanacsan tahay iyada, in ninkeedu yahay mid aan ku mahadin qiimayntiisa. ku filan, sidaad u nasiib badan tahay Waa inaad iyada ku haysataa gacmahaaga, ECT, ECT., Halkaas ayey ku joojin doontaa inay kuu sheegto nolosheeda oo madaxaaga ayey kululeysaa, waxayna nafsadeeda u huridoontaa inay ku dhunkato oo ay naaxiso naaskaaga, waa waqtigii iyada inay kaa dhuujiso sida aysan waligood noloshaada u samayn, haddaba ha isdhimin naftaada oo ha u bannayn ninkaaga damaca leh, ku nuugo ku xigeen iyo miyir la'aan, baaskaaga afka geli oo u sheeg inay indhaha kaa eegto si ay fiiri sida aad ugu raaxeysato, waa inaad ku raaxeysataa iyada oo u dhexeysa xanuunno iyo macaan, jilicsan oo lama filaan ah, kalgacal iyo murugo leh, ka dhig inay u raaxeysato sida digaagga oo kale, afarta dhig oo karbaashkeedana ku karbaash, u fuulo sidii mare, waad jiiday iyada timaha agteeda oo aad eegto bushimaheeda, waxaad dhagteeda wax qallooc ah ugu sheegeysaa, ugu dambeyn xaval, waxaan ku arkaa wax yar oo qallafsan markii aad si fudud ku leedahay, laakiin ha iloobin hal shay, haddii aad hesho waxaad yeelan doontaa xoogaa org Waxaan nahay dad aan la soo koobi karin, laakiin dhibaatooyinka sidoo kale way bilaaban doonaan, u qiimee xaval oo ha gashan shaatiyada kow iyo toban ulood, kuma arko inaad aad ufiican tahay inaad la dhaqanto haweeneydaas, taxaddar.
tani waxay jawaab u tahay sheekada Ramon
Luis, ha waalin, nin yahow ... hubaal waxaad lahayd maskax fayo badan iyo aragtiyo ballaadhan, heer wanaagsan oo akhlaaqeed iyo xitaa awood galmo oo aad u sarreysa, toos baad ahayd oo weligaa runta ma aadan maqnayn, wanaag ku qaadasho ... in gaagaaban, baakad aadanaha ku jirta oo wanaag leh; laakiin waxaan ka baqayaa in afadaadu aysan raacin baraarugaaga oo ay noqotay wax lamid ah waxaad ku sifeyso labada saf ee ugu dambeeya hadalkaaga, taas oo ah, "dhibbane" gaal khibrad iyo dulqaad leh. Adiguna waxaad ka soo toosaysaa xayndaabka cuckolds.
Is deji in Luisito dhaqso u gudbi doono, yaa og in haddii maalin uun aanad noqon doonin gaal postin ah ?, waxaan kuu xaqiijinayaa in kooxda baaxadda weyn ee loo yaqaan 'cuckolds', ubaxa kaa soo baxa oo kaa dhigaya gaal khibrad leh, inyar uun, kuwa kale raac Babia si aad u aragto inay soo socdaan, markaa is deji oo raaxayso, nasteexo nin, waxaad haysataa fursado kala duwan oo aad waqti fiican ku hesho, wax ku heyso oo dhoolla-caddayntaadu dib ugu soo noqoto, oo aad ahaato nin yare oo madax-yare ah.
In badan oo idinka mid ah ayaa ka sii fogaanaya nuxurka qoraalka, halkan waxaan uga hadleynaa sida loo sasabto haweeney la qabo, looma baahna dhibaatooyinka shaqsiyadeed ee qoto dheer, aan ku koobno ​​boostada su'aashaas, iyo qof walba oo halkan jooga fikradaha qaar iyo kuwa kale waxaan la soo bixi doonnaa xoogaa faa iido ah, kani waa hadal ku saabsan sida loo horumariyo xeeladeena khibradaha la sheegay, lana caawiyo kuwa kale ee shakiga qaba, ama aan qaadno talaabada ugu horeysa, waxaa jira akhlaaqiyayaal fara badan, rabshad badan, iyo kaffiir, waxaa jira qoraallo aan la tirin karin oo loogu talagalay dadka iyaga la mid ah
Daalibaan. 22 dijo
Waan ku dadaali doonaa talooyinkan wanaagsan, haweeney la qabo ayaa i xiiseysa, laakiin waligeed waxba iima sheegto, waagu waa beryayaa oo waan arki doonaa bye ..
Ujawaab Talibanka. 22
Waxaan ku waalanahay naag la qabo, way kala tagtay laakiin hada waxay la soo noqotay ninkeeda arrimo dhaqaale awgood, sideen ku ilaashan karaa hadaanan lacag haysan, hadaad ila talin kartid waan ku qanacsanahay ..
Ku jawaab luis e
Waa talo wanaagsan maxaa yeelay runtii waxaan si dabiici ah u raadiyaa dumarka xaasleyda ah ama saaxiibada la ah tanina waxay iga caawineysaa in badan inaan helo kala-soocid ka wanaagsan waqtiga sasabashada.
In kasta oo wax walba jiraan, waxaan u maleynayaa waxa ugu fiican inay tahay inaad naftaada is-muujiso. Ku haynta haweeneyda maalintii oo dhan waa waqti lumis aad u xun.
Waxaa jira qaabab badan oo loogu sheego gabadha in aan jecel nahay, iyo in xaaladdu sidoo kale saamaxayso in qofna xanaaqin. Faallo fudud oo qaabka ah "Wixii aan adiga kula jeclahay, ...!" lagu sameeyo dadweynaha, waxay si weyn u fududeyn kartaa iyada inay ogaato waxa aan maskaxda ku hayno. Marka la dhammeeyo, waa inaan sugnaa oo aan aragnaa falcelintooda.
In haweeneydu ogtahay waxa aan jecel nahay, isla markiiba na sii deyso oo ay ku wareejiso shaki iyo cabsi iyada.
Annaga, wixii markaa ka dambeeya saaxiibtinnimo, dhoolla-caddayn, indho-indheyn ... iwm
In kasta oo aan ahay haweeney, haddana waxaan jecelahay inaan fiiriyo golahan marba marka ka dambeysa oo aan u kuurgalo xeeladaha iyo xeeladaha ragga marka ay timaado ku guuleysiga.
Runtu waxay tahay inaad u timid hal mayl oo waayo-aragnimadan aan ka sheekayn doono waxay ku timaadaa mid waafaqsan waxa Ramón tilmaamay; Waa inaad iskaa u saxeexdid, lagugu ogaadaa si xeeladeysan oo aad taqaanaa sida loo sugo.
Waayo-aragnimadaydu waxay dib ugu noqotaa in ka badan laba sano. Qof kasta oo eegay faallooyinka wuxuu horey u ogaan doonaa nik ka «Patri».
Waan guursaday oo waxaan ahay maskax furan (dhowr sano hada).
Runtii waan jeclahay dharka, sifiican ayaan u labistaa waxayna ii tixgeliyaan xarrago iyo soo jiidasho (In kasta oo aanan jeclayn xanaaqa gabi ahaanba).
Had iyo jeer waxaan aadaa xarun ganacsi oo caan ah si aan u soo arko una soo iibsado dharka.
Sida iska cad, shaqaalaha iyo maareeyayaashu horeba way i garanayeen, in kasta oo aanan aqoon cidna.
Maalin maalmaha ka mid ah maamulaha dhirta (oo had iyo jeer xidhan jaakad quruxsan oo qurux badan, oo iga yara yar, ayaa ii yimid codsigayga si uu iiga warramo tayada dharka. Ninkayga ayaa goobjoog ka ahaa inkasta oo aanu dheg u dhigin xilligan la joogo) markii uu i tusayay tayada dharka aan labadeenuba haynay, ayuu gacantayda qabtay, isagoo si tartiib ah u riixaya.Wuxuu igaga tagay hal xabbo. Waxaan ogaaday sida uu u gariirayo sababtoo ah geesinimadiisa miyir la'aanta ah. Uma sheegin ninkayga shilka inuu iska ilaali dhibaatooyinka aan loo baahnayn.
Intaa wixii ka dambeeyay wuu ila saxanaa, laakiin markasta oo aan tago suuqa waxaan marwalba dareemi jiray inuu kacsan yahay oo uu horay iyo gadaalba u sii waday. Had iyo jeer wuu i salaan si caqli-gal ah oo aan si sax ah u abaal-mariyey; sidan oo kale in ka badan sanad ...
Hello Patri, waxaan aqriyay faallooyinkaaga iyo sheekooyinkaaga bilo yar gudahood waxaanan gartay inaan xiisaynayo la kulankaaga oo aan loo baahnayn inay shaqsi ahaan noqoto, waxay noqon kartaa tan macnaheedu inuu yahay mid aan shakhsiyan ahayn wixii kale ee aan noo oggolaaneyn inaan is aragno. indhaha inta aan hadlayno waxaan jawaab ka sugayaa qeybtaada xitaa haddii ay diidmo tahay
bogaaga ayaa ku leh nabad galyo
Aniga oo ka faa'iideysanaya xaqiiqda ah in aan haysto subaxyo bilaash ah, waxaan rabaa in aan sii wado xusuusashada waaya-aragnimada. Runtu waxay tahay inaan u arko wax xiiso leh, waxaan diiradda saarayaa.
Maalmahan waxaan hayaa, aan dhahno, xiriirro seddex geesood ah (ninkayga, saaxiibkeygii hore iyo maamulaha dhirta ee xarunta dukaamaysiga oo aan ku magacaabi doono "Juan" halkan). Runtu waxay tahay samirka iyo garaadka uu muujiyey inay kudhamaatay kuna sii hurisay hamigeyga. Subax ka mid ah wax yar ka dib markii aan furmay ayaan u soo dhaqaaqay dhanka suuqa. Wuxuu had iyo jeer kormeerayay agagaarka warshadda ama aagga xafiiska. Waqtigeyga waxaan ku qaatay inaan dharka u fiirsado si kaduwan. In yar ka dib waxaan arkay isaga, oo had iyo jeer aad u labisan, quruxsan oo raganimo leh. Muuqaal ahaan waxaan ku andacooday dareenkiisa; si loo qariyo waxay qabatay maryo gacmaheeda xilligaas. Markuu u dhowaaday ayaan si toos ah ugu idhi. "Haa Juan, muddo dheer ayaan is aragnay waana ogahay inaad rabto inaad ila kulanto, aniga sidoo kale, fiiri, gal qolka ugu horeeya ee ku habboon aniga oo i sug, dib ayaan u soo laaban doonaa. Saamaynta ereyadaydu waxay ahaayeen kuwo aad u weyn. Indhaha ayuu kala qaaday waxaanan ogaaday sida ay ardaydiisu u weynaanayaan. Wuxuu bilaabay inuu turxaan bixiyo: "Waayahay, halkaas ayaan aadayaa, qofna badanaa ma soo galo waqtigan."
Runtii, waan ogaa in waxa ugu horreeya subixii ay jiraan macaamiil yar oo shaqaaluhuna ay kala soocayaan dharka. Waxaan si qarsoodi ah u arkay isagoo soo galaya qolka ku habboon; Waxaan si tartiib ah u qaatay labis kale waxyar kadib waxaanan si tartiib ah u aaday qolka labiska oo madhan. Waxaa jiray shan qol oo beddelaad ah, waxaan si aamusnaan ah cunaha u yara sifeeyay xilligana waxaan arkay sida albaabka ugu dambeeya u socdo, aniga oo aan ka fikirin ayaan galay, waxaan sudhay dharka labiska jaakadda; isaga sida uu xirtay latch. Aniga oo aan sii amba-qaadin oo aanan waxba sheegin, waxaan bilaabay inaan xubintiisa ka salaaxo surwaalkiisa ...
Waa hagaag, waxaan la joogay haweeney xaasle ah laakiin waxay qaadatay 5 maalmood maxaa yeelay waxay ahayd kaliya sheeko marka aan u soconayno inaan aragno ninka oo akhriya dhammaan farriimaha in shitku run yahay inay tahay 24 sano jir waxaan haystaa 16 wanaagsan aniga run
Waxaa laga yaabaa inay qaar idinka mid ah la yaabto in haweeneydu ay ilaalin karto xiriir seddex geesood ah isla markaana ay dheelitirto dheelitirka. Sharaxaadda waa in jacaylka iyo galmada laga sooco. Ninka waxaa had iyo jeer loo tixgeliyaa inuu haysto kulliyaddan: kala soocidda galmada iyo jacaylka. "Sirta" waa in lagu caddeeyo xiriirka oo aan been la sheegin. Xaaladdayda, wax toos ah uma aanan raadsanin oo waan awooday inaan wax caddeeyo. Waan jeclahay ninkayga, runtu waxay tahay in labadeenaba aanu xaasid ahayn, laakiin inkasta oo aan sifiican galmada usameyno, aniga ima dhameystirto. Xidhiidhka goos gooska ah ee aan la leeyahay labada kale ma aha mid wax wada laha oo u adeega kaabis galmo. Way jiri doonaan qaar badan iyo kuwa badan oo diidan, laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa inaad yeelato oo aad si cad u sheegto ujeeddooyinka, inay wax waliba si fiican u shaqeyn karaan. Laakiin iska jir! Caqli ayaa muhiim ah oo maskaxda ku hay khatarta weyn ee tan aan u yeerno, waxaan ku ciyaaraa dab. Tan waxaa loogu talagalay oo keliya dadka aadka u dhiirran iyo dhiig-qabow. Maalin kale waxaan sii wadi doonaa inaan dib u muujiyo khibradeyda aan u maleynayo inay xiiso iyo faa'iido leeyihiin.
Kadib markaan aqriyey "mahadsanid", runti ma arko dhibku inuu leeyahay xiriir oo waxaan u arkaa inay ku dhiiran tahay inaad dhahdo "waad jeceshahay ninkaaga", tanna kuma dhahayo qof aamusnaan ama anshax leh, maxaa yeelay Waxaan ahaa kali ... si wanaagsan oo reer Chile ah aad ayaan ugu fiicanahay webeo-ga, markasta way cadahay inaan waxyaabo kala cadeeyo qofka kale (dadka) ... laakiin xiriir aan leeyahay, weligey ma noqonin mid aamin ah ... waa maxay dhibic sameynta xiriir lala yeesho qof kale, haddii uu sii wado inuu la joogo kuwa kale ?? ... "runta midkeenna ma nihin xaasid" ... taas miyaad ka hubtaa? Xaqiiqdii waad u sheegaysaa sababta oo ah inaadan ku jirin booska ninkaaga, adoo ah shaashadda.
Aad baan u hubaa in sidaada oo kale, 99% kuwa ka soo jawaabey maqaalkan ay yihiin kuwo maskax xumo badan oo aysan iyaga ku dhici doonin inay ka fekeraan waxa ay noqon doonto inay ahaadaan dhinaca kale, isagoo ah ninka.
Dhinaca kale, ka dib markaan akhriyey faallooyin badan oo ka imanaya rag isla markiiba doonaya inay si khaldan u adeegsadaan macluumaadka ku jira maqaalka; iyagoo doonaya inay u isticmaalaan oo kaliya inay "naag la qabo sariirta u jiifsadaan" ama "dameerkaas yar ka dhigato mid iyaga u gaar ah" ama dadka da'da ah oo kaliya oo ay rabaan waa inay cunaan gabadh da 'yar ... Waan ka xishooday oo waan xanaaqay, in qashin jiro nin ninkaas ka mid ah, oo aan waxba ka siinaynin dareenka qofka kale iyo in aan la xusin xaqiiqda ah in ay waxyeello u geysanayaan cilaaqaadkooda sababtoo ah danaysiga "xiritaanka gunti." In aragti xun laga yeesho ragga kale ee runti jacaylka u qaba naag la qabo oo leh xiiso dhab ah ka farxinta iyada oo la siinayo kalgacal, kalgacal iyo nabadgelyo ay u qalanto "naag wanaagsan".
Aragti ahaan, waligaa ha u qaadan lammaanahaaga mid fudud, qofna ma leh milkiilaha qofna ... rafiiqayagu wuu nala socdaa maxaa yeelay way jeceshahay, maxaa yeelay waxay jeceshahay shirkadeena ... waxayna ku xiran tahay oo kaliya annaga inaan ku sii wadno habkaas ; ku guuleysiga qofka kuma dhamaaneyso xilliga aad saxeexdo warqad ama aad ilmo dhasho, waa hawl joogto ah oo xilliyaysan, sida neefsashada ama cunista. Xaqiiqda kaliya ee gaarka ah ee laba jacayl ay siin karaan lamaanayaashooda oo cid kale aysan siin karin, waa gaar ahaanshaha jirkooda ... haddii aysan awoodin inay daryeelaan oo ay ixtiraamaan taas ... uma qalmaan inay xiriir yeeshaan
Patri, kadib markaan aqriyay "waad mahadsantahay", runtii ma arko ujeedada xiriirka aan leeyahay waxaana u arkaa inay ku dhiiran tahay inaad dhahdo "waxaad jeceshahay ninkaaga", mana ku dhahayo qof aamusnaan ama akhlaaq leh, maxaa yeelay intii aan kali ahaa ... Chilean wanaagsan waxaan aad ugu fiicanahay webeo-ga, had iyo jeer way cadahay inaan waxyaabo kala cadeeyo qofka kale (dadka) ... laakiin xiriir aan leeyahay, weligey ma noqonin qof aamin ah ... maxaa waa ujeedka inaad sameysato hal xiriir qof kale, hadaad sii wado inaad dadka kale lajoogto ?? ... »runta midkeenna ma xaasidno» ... taas miyaad ka hubtaa? Xaqiiqdii waad u sheegaysaa sababta oo ah inaadan ku jirin booska ninkaaga, adoo ah shaashadda.
Ahaanshaha saacaddii ugu horreysay, qolka ku habboon ayaa xasilloonaa si aan si deggan ugu dhaqmi karno. Isla waqtigaas uu xubintiisa kaga salaaxey surwaalkiisa, waxaan bilownay inaan dhunkado. Si kedis ah ayaannu u kala tagnay oo u lebbisannaa dhexda ilaa hoos annagoo aan erey oran. Dharkii ayaanu dul saarnay santuuqa. runtu waxay tahay in xittaa riyadeyda riyadeyda ah aanan maleysan karin xubin ka awood badan. Adkaanta kacsiga ayaa isaga istaagtay (aniga ahaan tayada ugu fiican), waxay sidoo kale yeelatay dhumuc weyn.
Waqtigan xaadirka ah waxaan si tartiib ah u qabtay phallus waxaan bilaabay inaan isku salaaxo sida burushka: kintirka, bushimaha banaanka ... Intaas oo dhan wuxuu igu qabtay badhida. Waa inaan idhaahdaa ficil ahaan isku dherer ayaan nahay (ciribta ayaan waxyar ka yarahay). Si tartiib tartiib ah ayaan bilaabay inaan xubinta xubinta taranka ka galiyo dhaqdhaqaaqyo yar, marka hore jaleecyada iyo inyar oo inyar oo dheeri ah ... Gacantayda midig ayaan ku qabtay oo aan ku hago gelitaanka. Muddo ka dib waan ka laabtay gacanteyda markii saliida iyo xamaasadu ay fiicnaadeen waxaanan iska daayay in gebi ahaanba la igu dhejiyo. Waxaan kusii nagaanay bartamaha qolka labiska, waxaan dareemay garaacida foolliyaha xoogan ee igujira. Waxaan horeyba u bilownay dhaqdhaqaaq bastoolad aad u xoog badan iyo safar dheer. Waxaan jeclaa in laygu laalo salka hoose ee balano ». Markaan marki uhoreysay waxaan xaqiiqsaday inuusan gaari karin orgasmka sidaa darteed waxaan ka codsaday inuu banaanka ku biyo baxo. Maaddaama reynreyntiisa ay sidoo kale ahayd mid weyn, waxaan dardargelinnay dhaqdhaqaaqyada, runti xoogaa wey ka baxday tallaabada. Si lama filaan ah ayuu xubintii ula soo baxay oo si dhakhso leh ayuu uga baxay. Waxaan daawaday, xiise galiyay, sida seddex diyaaradood oo shahwad ah ay soo baxeen oo cagahayga ugu dhaceen. Aniga oo aan waxba kahadlin, waanu labisanay waxaanan furay qolka badalashada si aan u hubiyo in cidina jirin. Jihada aan u socdo ayuu ii soo baxay oo igu yidhi: "hadda waan soo noqon doonaa." Wuxuu la soo noqday maro uu ku soo ururiyay shahwada. Waxaan ku soo baxay markii hore anigoo labbiska gacanta ku sita. Waxaan ka tagay. Wareegan koowaad waan guuleystay.
HAWEENKA AYAAN ILAALIYAA, N WUXU GUURSAN YAHAY LAGU LEEYAHAY 2 GABDHOOD, OO AAN UGU BADAN YAHAY KAALKA BOOBKA, MA GARAN KARO Laakiin KAFTANKU WAA QIIMO BADAN KII NOLOSHAYDA KABRONAS..,.,. ,.
RUNTA KIISKA AYAAN KALIYA AKHRIYAA QAAR KA MID AH Faallooyinkaaga…. OO AAN IDIIN KUGU SHEEGO IN AY II SII BADANAYO QAARO BADAN OO AADAN AQOONSANAYN ... MARKAY DUMAR IS GUURSATO ... INTAN KA DAMBEEYA MA AHAN INAY NOQOTO CIDNA ... NINKEEDA KELIYA ... HORTA AYAAD ILAAHAY KA DHAARSATAY ... WAANA IN AANAN ISKU DAYIN IN AAN KA GUULO… WUXUU KHATARSAN YAHAY .. WUXUU U YAHAY OX KU SOCDA GARGAARKA… EREYADU WAA Dhimasho… WAA KELIYA FALANKEYGA UT LAAKIIN WAAN KU XASUUSTAA IN MUHIIMKA NOLOSHA UU ISKU DAYAY INUU NAFTAAN BADBAadiyo AMA DAMBIYE WAAN QIRAA… LAAKIIN XUDUUDO AY LEEDAHAY… WAA IN AAN QADARO
Ku jawaab FRANKLIN
Boqolkiiba 90 haweenku waa kuwa aan aaminka ahayn, haweeneyda waligeed jacaylku kuma dhaco marka ninku si buuxda isu dhiibo waxay sameeyaan wixii ay rabaan, sida caadiga ah, ninku wuxuu noqdaa guevara haweeney gadaasheeda laakiin Guud ahaan waxay ku qeylinayaan aamin darro iyaga waxbadan nasiib ... naag kasta oo guursata oo jeceshahay iyo inbadan oo ay aad u caafimaad qabaan oo khiyaano badan yihiin kuwa aan aaminka ahayn waa vertdad aniga oo 45 jir ah waxaan ahay qof jecel in ka badan 30 haween ah oo xaasley ah runtiina Ma ahan inay aniga i raadinayaan oo waan foolxunnahay wax jiritaan ahna ma lihi waana sababta aan ugu kalsoonahay xaaskeyga inkasta oo aanan ka maseerin taas darteed waa sababta ay u tiraahdo anigu ma jecli laakiin sida hadalka hore loo yiri ul lagu cabbirayo waa la cabirayaa ... ..nuynca tus iyaga inay daneynayaan, kaliya u naxariiso iyaga oo waligaa ha ku xumaan haweeney midkoodna, ama noqo mid fiican oo taajir ka dhig oo waligaa ha ka takhalusin oo ha u oggolaan hal tag.
Ma jiraan aabbo wasaqeeysa aabe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shaqo barasho dijo
Aad baad u mahadsan tihiin, waan ku dhejin doonaa oo aan ku dhaqmi doonaa talooyinkaas, waxaan rajeynayaa inaan guuleysan doono, waxay noqon doontaa markii iigu horreysay
Waad ku mahadsan tahay dhammaan kuwa la wadaagay taladooda iyo / ama khibradahooda, midkeen kastaaba wuxuu u qaadan doonaa sida ugu habboon isaga oo ugu dabaqi doona si isku mid ah. Dhamaan waad salaaman tihiin, gaar ahaan Patri.
Runtu waxay tahay inay iga caawisay inaanan lumin wixii aan mudada dheer haystay, xaaskeyga, iyo sida aan marwalba idhaahdo, waligaa kama joogsanaysid barashada.
Hambalyo iyo mahadsanid talooyinka
Jawaab si fito8362
Qof aan isla shaqeyno ayaa si joogto ah ii sasabaya, laakiin maadaama aan horey u guursaday waan iska indha tiray waxayna bilowday inay iga fogaato, maalin maalmaha ka mid ah ayaan bilaabay inaan ogaado iyada waana ku sasabay, waxaan u maleeyay inaysan dooneynin laakiin waan layaabay way aqbashay maxaa yeelay waxay horey u laheyd guur doon, inkasta oo ay ii sheegto ineysan jecleyn, xaqiiqda ayaa ah inaan xiriir la yeeshay iyada ka dibna waxay ii sheegtay in waxa kaliya ee ay rabtay ay aheyd inay ilmo dhasho iyo hadii aysan rabin ilaa, mar dambe iima doonan doonto iyo inay sii ahaan doonto hooyo Single, mar kale ayey rabtaa waxayna ii sheegtaa inaan ahay kan la doortay, waana sababta ay ii siisay bikradnimadeeda, anigu garan maayo waxaan ku sameeyo samee maxaa yeelay waxaan doonayaa inaan u galmoodo iyada maxaa yeelay jirkeeda ayaa i soo jiita, laakiin ma doonayo inaan wax kale la joogo mana aqaano waxaan ku idhaahdo waxa uu ii soo jeedinayo ee ah inaan uur qaado, haddii qof ayaa wax i siin kara talo maxaa yeelay jirkeeda weyn ayaa i waashay.
haha si loo daryeelo jermu !!!
Ku jawaab anonimo2011
Xanuunsan menud @ s, gaalnimo iyo khiyaano ayaa ugu hooseeya bini aadamka !!!
Qofka tan akhriya waan jeclahay sodohday maxaa yeelay waxay isiisay sababo aan ku ogaado
Xaas ma lihi, waxaan la noolahay caruurtayda (3) wax badan ayay i caawisaa waanan qiraa; laakiin ma aqaano sidaan ugu sheego waxa aan u maleynayo anigoo ka baqaya inaan waraabiyo oo aan aad u diro.
iyo waxa ugu xun ayaa ah inuusan sii wadi doonin inuu i caawiyo sida aad aragto ………
xoogaa talo xfis waan ku mahadinayaa
qof khibrad u leh iyo inuu ila taliyo.
bye mahadsanid waan ku qanacsanahay
Jawaab ku sii Capturista
Ka guuleysiga haweeneyda la qabo waa waxa ugu fudud adduunka, marka ugu horreysa muuji dabeecaddeeda, haddii haweeneydu tan aqriso waxay fahmi doonaan inay tahay wax ay aad u qiimeeyaan, haddii ay yimaadaan kulan ama xaflad asxaab ah, qaado iyada u soo bax si ay u dheesho una tusto sida ay u wanaagsan tahay, adigu waad tahay, naagna ma hor istaagi karto taas, ka dib u soo dhawaaw iyada oo aan wax dan ahi jirin, laakiin u tag oo ka hadal dhibaatooyinkeeda oo talo siiso, mararka qaarkood kaftanka qaarkood, inay ku qabato adiga oo fiirinaya iyada iyo voila iyadu way kuu sheegi doontaa adiga ...
Waxaan raacayaa seddex dhammaantoodna waxaan la socdaa carruur ... laakiin waxay ku bilaabatay aniga oo aan rabin ... waan qirayaa, waxa kaliya ee aanan ogeyn, waa inay ninkooda noqon doonto ... ma sidaas oo kale ayey igu sameyn doonaan Yaa og, laakiin cidina kaaama qaadi karto.
Jawaab Giancarlo Bautista
Waad salaaman tahay, waxaan ku jiraa xaalad aanan garaneyn waxa la sameeyo, maxaad kugula talin laheyd waa naag labo caruur leh, waxay leedahay nin wanaagsan, waa seedigey runtiina waan jeclahay naagta laakiin ma ogi inay iyadu i jeceshahay laakiin waxaan hore u eegay calaamadaha qaarkood Xitaa waxaan ku wada noolaanay hal guri waxaanan jeclaan lahaa inaan la joogo iyada oo aan sameeyo si aan ula joogo sidoo kale waan ogahay inay xidhiidh la leedahay ninkeeda isla waqtigaas si fiican iyadu waa ficil ahaan wax la dayacay oo aan sameyn karo
Hagaag, kan kore waxaan kugula talinayaa inaad raadsato inaad kala hadasho haweeneyda la yiraahdo arrimaha shaqsiga ah halkaasna ka bilow inaad ogaato xaaladdeeda, taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad falanqeyso fursadahaaga. Haddii aad ogaato inaad fursad u leedahay waa inaad si tartiib tartiib ah u socotaa ugu dambayntiina waxaan kugula talinayaa inaad akhrisato faallooyinkii hore, nasiib wacan
WAXAAN LEEYAHAY DHIBAATO… WAAN KA JECLAHAY KHATAR AH LAAKIIN LAGU XUN, MAXAAN SAMEEYAA?
FADLAN JAWAAB !!
Anigu waxaan haystaa xaalad sida ay tahay arrinta, waxaan jeclahay haweeney la qabo, waxay qiyaastii tahay 35 sano jir ama ka yar laakiin waxaan ahay 18 sano jir sidoo kale waxay leedahay 2 caruur oo yaryar, ninku wuxuu ka mid yahay ragga lacagta la siiyay, waad ogtahay. .. way yartahay waan qirayaa laakiin waxay leedahay waji aad uqurux badan, ilaa hada ma aqaano xitaa waxa la sameeyo, ama inaan dhowr sano sugo ama aan farax galo oo aan halista halista wada galo waqti isku mid ah, waan isku dayay si aan u sameeyo xiriir indho iyo mararka qaar way shaqeysay anigana in badan ayaan eegay iyada Si kastaba ha noqotee, si aanan u arkin naftayda si muuqata, waxaan indhahayga u weeciyay dhowr ilbidhiqsiyo ka dib, mararka qaar iyada, deriskayga ah, waxaan arkaa inay baxdo gurigeeda iyo hadii aan banaanka ka joogo, sidoo kale waxaan isku dayay inaan qariyo, xitaa uma jeedin inay u aragto haha ​​esque wax ka badan mararka qaar waxaan dareemayaa cabsi ah inuu ogaan doono inaan jeclahay oo aan ku qoslo ama wax kale.
Laakiin sidoo kale maalmo ka hor waxbaa dhacay mana garanayo haddii ay tahay tilmaan muujineysa inay iyadu jeceshahay: Waxaan banaanka la joogay saaxiibkey oo si fiican, waxay ka tagtay gurigeeda, runta ayaa ah in hadhow ay mararka qaarkood caadi tahay in la arko haween la qabo , oo leh surwaal aad u badan. guango, flip flops iyo jaakad aad u dabacsan sidoo kale timaheeda oo aad u qasan lol sidii oo ay hada soo kacday oo sifiican waxaan kuu sheegayaa inay baxeyso laakiin ma arkin aniga iyo saaxiibkay maxaa yeelay waxay timid nooc. iyada oo madaxa hoos u taagan oo bilawgii aan socon lahaa oo aan kor eegay (sida inaan u socdo dukaanka ama wax la mid ah) markay na soo eegtayna way soo jeesatay oo ku dhowaad markay gurigeeda soo gasho waan jeestay si aan u arko iyada oo ka baxsan isha indhahayga waxaanan arkay in ka hor intaanan soo galin markii ay furtay albaabkeeda uu xoogaa i dhugtay ka dibna uu soo galay, saaxiibkay, sidaan ugu kalsoonahay, waxaan u sheegay inaan ka helay iyada iyo ka dib waxaa nagu soo dhacday in laga yaabo inay soo gashay maxaa yeelay way ka xun tahay inaan arkay iyada oo labisan, maxaa yeelay hadii ay soo laaban lahayd maxaa yeelay wuxuu ilaaway lacagtii ama aglo maxaa yeelay isla markiiba wuu soo baxayaa laakiin mar dambe ma oga Waan isku qasmay waqtigaas, taasi waa sababta aan ugu maleynayo inay la xiriirto haddii aan soo jiito.
Ugu dambayntii waxaan rajaynayaa inaanan waxbadan isku fidin laakiin waxaan jeclaan lahaa fikirkaaga iyo talooyin khibrad leh.
Wax ku darsasho aad u wanaagsan waa inaan ku dhaqmaa tan iyo markii aan jeclahay jilista meesha aan ka socdo maalinta ugu horreysa aad ayey ii jeceshahay anigana wali aad ayaan u jeclahay runtu waxay noqon laheyd markii iigu horeysay ee aan xiriir la yeesho haweeney la qabo! isla waqtigaas waxaan dareemayaa qariib laakiin waxaan jeclahay inaan sidaas oo kale dareemo! Ma aqaano haddii aan sharxi karo Markuu aakhirka timaha dhaqo, waxaan istaagayaa dhamaadka marka uu gacmihiisa dhaafo !!! caruur bay leedahay !!! Waxaan usheegay in aan baxayo maalmaha fasaxa ah waxayna ii sheegtay inay rabto inay baxdo !! laakiin ma ogi waxa igu dhaca ee aanan ku dhiiran karin inaan u sheego inaan baxayno !! Ma aqaano haddii aan ku arko iyada oo kaliya inay iyadu tahay stylistkayga oo aan ahayn saaxiib !! Waxaan rabaa talooyin !!!
lilianita aunk miyaad guursatay ma ogtahay inaan ku jeclahay iyo inaan isku dayi doono wax walba si aan u wada joogno .. waan ku sugi doonaa hadii intaas aysan kugu filnayn ma garanayo waxa kale ee la sameeyo ... iska ilow Ma awoodo pikita waan ku jeclahay
Munaafiqiin miyaydaan fahmin wuxuu ilaahay idinku faray bilawgii wakhtigii uu ilaahay abuuray Aadam, wuxuu yidhi ma fiicna in ninku keli ahaado oo wuxuu abuuray gabadh ku haboon oo uu ninka ugu sheego sino dartiis ninku aabaha ayuu ka tegayaa iyo hooyo kuna soo biir xaaskiisa.
oo wuxuu ku yidhi NINKA oo ah AMARKA QUDUUSKA IYO GEERIDA ma jeclaan doontid naagta deriskaaga ...
LAGU TILMAAMAY dijo
waxaan baranaynaa inta aan dhibaataysan nahay… ..
Kajawaab EL ILUMINADO
oo wuxuu ku yidhi NINKA oo ah AMARKA QUDUUSKA IYO GEERIDA ma rabi doontid naagtaada deriskaaga
Anigu waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo xaas leh hadana waxaan hayaa xaaskeyga iyo labo kale labada kalena waa isqabaan qodobkaan wuxuu ku siinayaa oo kaliya fikrado aad ku guursato laakiin hagaha runta ah ee lagu guuleysto ama lagu sasabto haweeneyda waa inaad noqotaa naftaada oo aad markasta daacad u tahay runta waligoodna dhibaato ma yeelan doonaan, waxaan u sheegay lammaanayaashayda tan iyo bilowgii waan guursaday labaduba way ogyihiin oo waxaan la joogay 12 sano iyo saddexda ficil dabcan in afadu aysan ka warqabin kuwa kale iyo kuwa kale ma garanayo wax ka badan Xaaska okay waxa aan sameeyo laakiin waan jeclahay iyaga waana jecel yihiin inkasta oo aan isqabno hadana marwalba waan iska caawinaa wax kasta oo cad markasta oo aan la ogeyn inaan sifiican u wada joogno tani waa ujeedkeyga iyo xoogaa sheekadayda
da 'yar dijo
Runtu waxay tahay inaan arkay faallooyinka oo dhan, qaar fiican qaarna xun yihiin aragtidayda, waxaan u maleynayaa in qofku uusan ku mashquulin haweenka la qabo xitaa haddii ay aad u cunitaan badan yihiin oo hodan yihiin, waxaan aqriyay qaar ka mid ah faallooyinka Patri ayaa sameysa oo runta waxay tahay Waxay sameysaa fowdo aad u xun ama dhillo ah waxa ay u sheegatana waa been saafi ah oo iga dhigeysa inaan toogto sheekooyinka sheeko galmo ama wax la mid ah, laakiin dhamaadka taasi waa sheeko kale.
Anigu waxaan ahay dambiile waana ogahay inaan khaldanahay laakiin adigu ma cambaareysid naftaada, dhagayso markhaatigaan hana khiyaamayn dumarkaaga ama haku mashquulin haweenka la qabo waa macquul oo waa macquul caqli gal ah, fadlan ii soo ducee si ALLE u cafiyo Xumaantayda oo dhan,
waad ku mahadsantahay aqrintaada xitaa hadii qaar khalad iiga noqdaan, mahadsanid
Sixir salaada jacaylka in aad ka fikirto! Iimaan weyn! Akhri jumladan si taxaddar leh una samee waxa ay ku farayso adigoon iska indhatirin tallaabooyinka ay kaa codsaneyso inaad raacdo, maxaa yeelay haddii kale waxaad heli doontaa oo keliya natiijooyinka ka soo horjeedka waxaad dalbatay. Ka fikir qofka aad rabto inaad la joogto oo magacooda kugu sheego 3 jeer. Ka fikir waxa aad rabto inaad ku dhacdo qofkan usbuuca soo socda oo naftaada ku celi 6 jeer. Hadda ka fikir waxa aad ka rabto qofkaas oo mar uun dheh. oo hadda dheh .. Ray nuurka waxaan kuugu yeedhayaa inaad qodato -magaca qofka- meesha uu joogo ama cidda uu la joogo oo aan ugu yeero inuu jacayl iigu yeedho oo uu maanta toobad keeno. Qodo wax kasta oo ka hortagaya -magiciisa- inuu iigu yimaado-magacaaga-. Dhinac iska dhig kuwa wax ku darsanaya ee aan ka guureyno iyo inuusan ka fekerin dumarka kale in ka badan oo kaliya inuu iga fikiro -macaankeenna- Inuu iigu yeeray oo uu i jecel yahay. waad ku mahadsantahay, waad ku mahadsan tahay awoodaada dahsoon ee had iyo jeer fuliya wixii laga codsado. Kadib waa inaad ku dhejisaa xukunka seddex jeer, seddex goobood oo kala duwan.
Sideen u qaadan karaa xaaskeyga inaadeerkey sariirta aniga oo aan waxba u sheegin inaadeerkey waxaan u baahanahay caawimaad waa deriskeyga ayaa leh jir yar waxaan u diray warqad yar oo aan ugu sheegayo hadii ay aqbashay warqad mana ay ii jawaabin oo sida muuqata iyadu ma xanaaqin
Muriel brayan dijo
Waxaan u maleynayaa habka ugu wanaagsan ee dumarka lagu sasabto inay tahay qoob ka ciyaarka
kacsi ama u siiso duugis, habkan waxay dareemi doontaa dabacsan.
Sidee jacayl loogu sameeyaa nin
Ku jawaab brayan muriel
Jawaab Vdj Vinnie
Waxaan jeclaaday naag la qabo mana ilaabi karo.
Jawaab Zamuel Nuñes
hadday tahay 71 dijo
Hahaha ma ogtahay? Way fiicantahay in la akhriyo noocyada maqaallada, si loo ogaado waxa ay tahay in haweenku aysan ku faalloon "horjoogeyaasha" hortooda Haweenku waa bini aadam qaali ah oo qurux badan CIDNA xaq uma leh inay noo isticmaasho sidii qaybo hilib ah. Haddaan ragga la xusuusan, waxaan leenahay dareenno. Ha ka dhigin "xaabada geedka dhacay". Ma ogid haddii aad lacag ku bixinaysid mid ka mid ah dumarka isku reerka ah, mase xusuusataan gabdhihiinna, gabdhihiinna iyo xitaa hooyooyinkiinna saboolka ah ? Aan aragno, hadda, # qoob ka ciyaarka dusha sare ciddiyaha ii ah ».
Ku jawaab mau71
dialer diaz dijo
Waxaan rabaa inaan la seexdo duegradayda laakiin taajir sida aan u sameeyo qof i caawiya
Ku jawaab wilder diaz
4 sano kahor waxaan la joogay naag gooni ah, waan is jeclaan jirnay laakiin waxay kudhamaatay 4 bilood kadib, kadib waxay la soo noqotay raggeedii oo waxaan ahayn kuwa is jecel mudo ku dhow 2 sano .. wax aan bartay ma ahan in la dhibaateeyo wax badan, in la waco markii ay kuu sheegto in aysan hada ku cadaadin karin wax kale, oo aad ka taageerto wax walba .. dabcan waxay ahayd mid aan xasiloonayn dabeecadeeda Wax kastoo aan u sheego oo ku saabsan arinta way dhibtay anigana waxaan abuuray dhibaatooyin .. hadii si taxaddar leh wax badan ayey ka caawisaa iskuna day inaad ka gudubto waqtiga aan si fiican kuu siin karo .. kiisku waa inuu dhamaaday oo wuxuu iga tagay xa xa oo leh dabeecad ka sii fiican ninkeedana sidoo kale hahaha si fiican way u xanuun badneyd laakiin xitaa maanta waa saaxiibkay iyo Waxaan rajaynayaa inaan la joogo sariirteeda goor dhaw .. faahfaahinta ayaa ah in nasiib xumada ay noloshayda ku jees jeeso 2 sano ka hor waxaan la kulmay naag kale oo xaasle ah, waxaan ahayn saaxiibo iyo wax walba laakiin laga bilaabo Janaayo ilaa taariikhda oo ah Juun waxaan bilaabay inaan ku sheekaysto Mar dambe ma sii daayo batariyada iyada oo maalin maalmaha ka mid ah ayaan u wacay iyada oo ku saabsan shaqada waxayna ii sheegtay in ninkeeda uu u doonayo inuu u iibsado gaari kale waxaanan u sheegay inay si fiican ugu adeegaan Adigana halkaas ayaad igu casuuntay, waxay ii sheegtay inaan ahay qofkii aan ku casuumi lahaa, kiisku waa maalin kale oo aan la hadlay iyaduna waxay ii sheegtay inay caajiso ka dibna aanan ku casuumin iyada oo aysan rabin bax, waxaan soo baxnay maalmo yar kadib waxaan u aadnay ke oo keli ah wey i canaanan doontaa iyadoo ii sheegeysa in saaxiibo kaliya ay joogeen, hadii ninkeedu uusan joogin, markaa hadii fursad ay jiri laheyd .. ogow, taageer, ka caawi adoo in yar u daawanaya iyada iyo caruurteeda adoo ku amaanaya amaan, indho indheynteeda iyo lahadalkeeda iyada oo labanlaaban iyo daawashada iyo qosol badan, waxaan moodayay inay horay u soo martay waddo wanaagsan. laakiin runtu waxay tahay inay caqabado xoogaa ah u dhigtay ninkeeda oo ay iyaduba garwaaqsatay. Anigu ma ihi qof xukumaya laakiin isagu waa qof khamri cabsan oo xataa aan masuul ka ahayn iyada iyo caruurteeda, marar badan ayuu ooyaa iyada ... .. xaqiiqadu waxay tahay hadda, maadaama uu in yar iska fogeeyay, wuxuu ku sigtay ha i soo wicin ama aniga iyo sida kaliya ee uu ku yiraahdo talo ayuu siiyay waan caawiyay laakiin sidoo kale waxaan ku celiyey iyada laf yar waxaan sameeyay tabteyda .. nasiib daro iskama tuurin nafteyda si aan u siiyo dhunkasho x xushmad, waxaan ku iri waxaan rabaa inaan ku arko oo uu ii sheegay inuu ii yeedhay .. si daacad ah isagu aad buu u daneeyaa ma x x jirkiisa hadii ay fiicantahay hadaan gudaha ku jirin .. maanta waan xayiranahay mana garanayo waxaan sameeyo maxaa yeelay runta hadaan ahay xiisaynaya iyo sidoo kale waxaan siiyay xoogaa talo ah sababta oo ah waxaan rajaynayaa qaar
Xusuusnow inaadan dhibaateyn maalinta oo dhan marka laga reebo inaad ogaato inuu ninku jiro, ha taaban arrimaha guurka, ha qaadanin door ka baxsan waxa aad tahay, waxaan ula jeedaa gacaliyaha aan shaqeynin, ha ka maseerin ninka tan iyo tani waxay ka xanaajisaa iyaga, tan ugu dambeysa Markasta maskaxda ku hay inay tahay mid qof kale leeyahay, oo aysan ahayn midkeenna, iyo in noooo la heli doono
Haweenka quruxda badan ayaa cabsi gelin kara. Iyagu waa soo jiidasho, waa ku kalsoon yihiin, waxayna heli karaan nin kasta oo ay rabaan, sax? Xaqiiqdii waxaad u maleyn doontaa inaadan aheyn qof soo jiidasho leh ama kalsooni kugu filan inaad lahesho gabar sidan oo kale ah, sax?
Waan ku tusi karaa inaad qaldantahay
Waxaan la seexday dumar aan tiro lahayn. Moodooyinka, haweenka ganacsiga guuleysta, iyo xitaa qaar ka mid ah gabdhaha jaamacadda.
Waxaan ahay nin caadi ah, xitaa wax yar freaky. Laakiin waxaan bartay sida dumarka loo sasabiyo oo aad uga qurux badan oo iga guuleysta. Aan kuu sheego sirta ku jirta buuggan oo aad soo dejisan karto haddii aad rabto inaad la seexato dumar badan.
Halkan ka degso: http://tinyurl.com/lw49wrv
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado in aan ahay EDO MEX NAAG LOOGU TALAGALAY AMA DHEER K AYAAN AHAY 33 ilaa 37 SANO JIR AAN AHAY 29 INVESTORS7787@HOTMAIL.COM WAAN SUGAY FARIIN
Ku jawaab RE
Haddii ay hooyadaa qabanayso
Waad salaaman tahay, waa talo aad u wanaagsan laakiin, waa inaad xisaabta ku darsataa marka dabeecada haweeneydu ay heer uun tahay heerka xishoodka iyo xishoodku waa xaaladdeeda shucuureed ee dabiiciga ah, way adag tahay in xitaa la soo dhawaado ugu dambayntiina waa lagu jahwareerayaa jawaabta fariinta, Dabeecad kasta ... Ilaa iyo inta ay kali yihiin, naagta la qabo waa inay sida ay tahay ku sii socotaa, inay go'aan ka gaarto mooyee iyo tan ka soo horjeedda oo ay ku jirto "qaddar ama nasiib wanaagsan" ee dhammaad, caafimaad ma aha in la been sheego, waxaan qorayaa hal gacan maxaa yeelay nin xaasid ah ayaa gacanta kale ka gooyay ... hehehe, waa kaftan, run maahan laakiin waa wax aad u macquul ah marka, haweeneyda ayaa kali ku fiican, hadaad rabto inaad isu soo dhowaato ...
Jawaab Alejandro Fernández
Tani waa bikrad aad u badan, iyo faallooyinka more ...
Maqaalka noocan ahi waa wax aan macquul ahayn. Maxaan cadaabta ugu mashquulin karaa haweeney la qabo? Way ii fududahay inaan ka fikiro wixii aan ku sameyn lahaa nin kale naagtiisa in lagu sameyn doono xaaskeyga. Ha sameyn waxa aadan rabin in lagugu sameeyo. Sida ugu fudud ee.
Waxaan ahay 19 jir waxaan jecelahay haweeney 45 jir ah oo xaasle ah waxaanan rabaa inaan guursado oo aan diro mana sheegi karo sida aan u sameeyo maalin kasta waan arkaa iyada waxna kamala hadlo Waan sameeyaa
Wax walba waa wax aad u xiiso badan, anigu waxaan ahay haweeney, waxay umuuqdaan kuwo qurxan oo jir wanaagsan leh, iyo waxa kudhaca dumarka, waxaan arkaa nin indhahayga qabanaya, nabadna kumajiro ilaa aan cunno, dhowr jeer, taasi waa Waxaan samada aadayaa oo aan aadayaa cadaabta aniga oo leh raaxo saafi ah oo jacaylka aan la qiyaasi karin. Ilaa aan arko waqtiga xiga ee aan rabo inaan sameeyo, markaa waan caajisto, oo xiisihiina way iga baxaan. Aniguna waxaan u socdaa tan xigta ee aan maanka ku hayo. Midkee dhammaan geesiyaasha ah, oo isku sheega kuwa guuleysta, ayaa igu dhiirranaya inay jacayl igu dhacaan.
Taasi way xanuunaysaa sida dadka badankiisu u maleeyaan. Xiriir lala yeesho haweeney la qabo waa ZIN. Waa mid ka mid ah dunuubta ugu xun ee Eebbe hortiisa leh oo leh cawaaqib xumo. Kuwa kale, xiriirku wuxuu ka dhismaa qofka xanuunkiisa, wuxuu soo jiitaa saboolnimo, wuxuu abuuraa nacayb iyo dood qoysaska, cudurrada iyo habaarka carruurta iyo carruurta ay sii dhaleen. Iyo geerida ugu xun ee dhillayaasha dhexdeeda, sida Baybalku leeyahay.
Dhamaantiin waad salaaman tihiin, waxaan rajaynayaa in qof uu uga jawaabo tan maxaa yeelay way i dhibeysaa ... Waan jeclahay sodohday waxaanan doonayaa inaan la seexdo iyada inta jeer ee aan dooneyno ... waa 37 sano jir waxaan ahay 19 jir waxayna leedahay Dabeecad adag marka laga reebo inay u sheegto wax kasta oo lammaaneheeda ah ... wixii ay saaxiibtey ii sheegto inay fududahay laakiin runta ayaa ah inaan arko iyada oo murugsan ... Waxaan jeclaan lahaa qof iga caawiya sidii aan u dhammayn lahaa riyadayda talooyin qaarkood waxaan rajeynayaa in qof si deg deg ah iiga jawaabo
PS Waxaan tuhunsanahay inaan soo jiito iyada maxaa yeelay wax badan ayey i aragtaa oo markaan shaati la'aan ahay, waxay i aragtaa anigoo si dhuumaaleysi ah FADLAN FADLAN !!!!!
Runtu waxay tahay dhamaan nacasyadan wax ka faallooda inay rabaan inay guuleystaan ​​haweeney xaasle ah oo ku dhaaraneysa Ilaah hortiisa inay ahaato mid culeys iyo dhuuban ilaa ay geeridu ka soocidoonto jacaylka noloshiisa, 15 jir waxaan u arkaa inaan naftayda ka sii bislaaday ku xumaaday khiyaaliga aan xasilooneyn iyo doqonimada ah ee doonaya inuu burburiyo qoys haweeney horey qoys u sameysatay, waana qeyb ka mid ah tiirka taageeraya jacaylka ka dhexeeya iyada iyo kuwa ay jeceshahay.
Salaan kadib, waxaan ahay Lara Luiz oo reer Brazil ah laakiin waxaan daganahay California (USA) maanta waan ku faraxsanahay maxaa yeelay waxaan gaadhay wixii
Marwalba waan rabay. Waxaan la kulmay DR.Zubia kuwaas oo u bedelay qaabkeyga sida uu yahay maanta. Waxaan rabaa
Aad ugu mahadnaq isaga dheh, waxaan rabaa sidoo kale inaan ku ogeysiiyo inuu isagu sidaas oo kale kuu sameyn karo. Waana leeyahay
Inaad ogaato ka dib qaadashada dhirtaada inay yihiin dabiici oo aan wax saameyn ah lahayn ayaa ugu fiican
Dhaqtarka dhirta ee aan noloshayda kula kulmay. Markii ugu horeysay ee aan arko in aanan waligay aaminin inay run tahay ilaa
Waxaan bilaabayaa inaan arko isbadalada jirkeyga, waxaan dhahayaa mahadsanidiisa weyn meelkasta oo uu joogo.
La xiriir zubiazabiadum@yahoo.com Waan ogahay inay sidoo kale weyneyso badhida iyo laabta
Jawaab Lara Luiz
Waxaan aaminsanahay in kuwa ka xanaaqaya haweeney la qabo ay yihiin dadka ugu xun ee u jira burburinta xiriirka.
Waxaan dareemayaa soo jiidasho weyn aniga iyo saaxiibkey xaaskey ah oo xaas leh, waxaan u maleynayaa soo jiidashada inay tahay mid isweydaarsi maadaama mararka qaar aan is eegayno indhaha oo aan dhoola cadeynayno ama markaan is salaameyno ama is macasalaameynay, hadii aysan iyadu aheyn, waa aniga kan taabanaya gacanta kale. Ma aqaano hadii ay ahaan laheyd fikradayda inay wax jiri karaan mana garanayo sida horay loogu socdo
Waxaan isku dayayaa inaan xiriir la yeesho eedaday, waxay igu muujineysaa dabeecad geesinimo leh, aniga waxaan labo jibaar nahay gabdhaheeda, sidaa darteedna waxaan u diray fariin, waxayna ii sheegtay inaan la joogo sir na dhexeysa oo aan kaliya u diro a fariin markaan keli ahay
Ku dar midabka casaanka ah muuqaalkaaga Kirismaska ​​fikradahan